January 2014 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Friday, January 31, 2014, under ဗဟုသုတ | No comments
ညအိပ်ရာ ဝင်ချိန် နောက်ပိုင်းတွင် လက်ကိုင်ဖုန်း အသုံးပြုသော ဆယ်ကျော် သက် များဟာ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ များ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ များပြား ကြတယ်လို့ ဂျပန် သုတေသီ များက တွေ့ရှိ ခဲ့ကြပါ တယ်။
အိပ်ရာ ဝင်ပြီးနောက်မှာမှ လက်ကိုင်ဖုန်း အသုံးပြုပြီး ဂိမ်းဆော့ခြင်း၊ အင်တာနက် ကြည့်ခြင်း၊ မက်ဆေ့ခ်ျ ပို့ခြင်း၊ ဖုန်းပြောခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်သော ဆယ်ကျော်သက် များဟာ အိပ်ရေးပျက် သည့်အပြင် စိတ်ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ပြီး မိမိကိုယ်ကို သတ်သေသည့် အတွေးများ ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်ခြေ များကြပါတယ်။
အရက်၊ မူးယစ် ဆေးဝါးသုံးသည့် ဆယ်ကျော်သက် ဖြစ်ပါက မိမိကိုယ်ကို ဒုက္ခရောက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ခြေ ပိုမိုမြင့်မား တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သုတေသီ များရဲ့ သုံးသပ်ချက် ကတော့ ညဥ့် နက်ချိန် လက်ကိုင်ဖုန်း အသုံးပြုခြင်းကြောင့် စိတ်ကျန်းမာရေး ထိခိုက်တာ မဟုတ်ဘဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ရှိနေနိုင်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက် များဟာ ညဘက် မအိပ်ဘဲ လက်ကိုင်ဖုန်း အသုံးပြုကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ညအချိန်တွင် တောက်ပသော အလင်းရောင်ကို ကြည့်ခြင်း၊ ဦးနှောက်ကို နှိုးဆွသော အလုပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာ အိပ်စက်ခြင်း ဟော်မုန်း ဖြစ်သော မယ်လတိုနင် ဟော်မုန်း ထွက်ရှိမှုကို ပြောင်းလဲစေပြီး ညအချိန်တွင် ကောင်းစွာ အနားယူနိုင်ခြင်းကို ထိခိုက်စေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိပ်မပျော်ခြင်းဟာ မိမိကိုယ်ကို သတ်သေသည့် အတွေးများ ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်ခြေကို မြင့်တက် လာစေကြောင်း သုတေသနများ ရှိထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း အဆိုပါ သုတေသနဟာ မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်း ကြံစည်နှုန်း မြင့်မားသော ဂျပန်လူမျိုး ဆယ်ကျော်သက် များအား လေ့လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှု ကွဲပြားနေခြင်း အပေါ်မှာလည်း မူတည်နေကြောင်း သိရပါတယ်။
နယ်ပရိသတ်များရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ နယ်မှာ သီချင်းတွေ ဆိုနေရတဲ့ ၀ါဆိုမိုးဦး
နယ်ပရိသတ် တွေက သူရဲ့ သီချင်းဆိုမှု တွေကို နှစ်သက် လက်ခံလာတဲ့ အတွက် နယ်မှာ မကြာခဏ ဆိုသလို သီချင်းသွားဆိုခဲ့ ရတယ်။ အခု ဒီလထဲမှာလဲ နယ်ကိုသွားပြီး သီချင်းထပ်ဆို ရဦးမယ်။ အဲဒီအတွက် သရုပ်ဆောင်ဘက် မှာလည်း ကျမသွားအောင် ကြိုးစားမှာ ပါလို့ သရုပ်ဆောင် ဝါဆိုမိုးဦး က ယခုလို ပြောပြခဲ့ပါတယ်..
'' ညီမက သရုပ်ဆောင် အလုပ်ကို ကလေးဘဝ ကတည်းက ကလေး သရုပ်ဆောင် အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့တာပါ။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု ပေးပွဲမှာ ဗန်းကိုင်အဖြစ် ရွေးချယ် ခံရပြီး နောက်ပိုင်းက စလို့ အနုပညာ အလုပ်ကို ဇောက်ချ လုပ်ခဲ့တာပါ။ အခုလက်ရှိ အချိန် အထိတော့ ညီမ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးတွေ ၊ ဗီဒီယိုဇာတ်ကား တွေနဲ့ ကြော်ငြာတွေ အများကြီး ရိုက်ပြီးပါပြီ။ ပရိသတ်တွေရဲ့ လက်ထဲကိုလဲ အရောက်ပို့ခဲ့ တာတွေရှိ သလို မကြာခင် ထပ်ထွက်လာမယ့် ဇာတ်ကားတွေ လဲရှိနေ ပါသေးတယ်။ အခုလက်ရှိ မှာတော့ မင်းသားသစ် ကိုနေဒွေးဇော်နဲ့ ဖန်စီသရဲ ကားတစ်ကား ရိုက်နေတယ်။ ပြီးတော့ ကိုကျော်ရဲအောင် ၊ မစိုးမြတ်နန္ဒာ တို့နဲ့လဲ တွဲပြီး ''အို... ခယ်မ'' ဆိုတဲ့ ဟာသဗီဒီယို ဇာတ်ကားကို မနေ့က အဆုံးသတ် ရိုက်ခဲ့ ပါတယ်။ အခုဒီလထဲမှာပဲ မုဒုံမှာရှိတဲ့ ဆရာတော်ကြီးရဲ့မွေးနေ့မှာ ညီမသီချင်း သွားဆိုရမယ်။ အဲဒီ ကနေပြီးတော့ မန္တလေးနဲ့ ပခုက္ကူ ဘက်မှာ ဆိုရမယ်။ စင်ကာပူ နိုင်ငံမှာလဲ
ရှိုးလျှောက် ရမယ်။ ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏအား ကစားကွင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ ၄၅ နိုင်ငံ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ မာရသွန် ပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲ မှာလဲ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ အနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်'' လို့ ပြောပြ ခဲ့သည်။
သရုပ်ဆောင် ဝါဆိုမိုးဦး အနေနဲ့ ယခုအခါ ပရိသတ်တွေရဲ့တောင်းဆိုမှု အရ နယ်ရှိုးပွဲတွေမှာ သီချင်းသွားဆို ရတဲ့အတွက် သရုပ်ဆောင်ဘက် တွင် ကျသွားမလားဟု ပရိသတ်များက ထင်ကြေးပေး နေသော်လဲ သူကတော့ သူဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာ အလုပ်နှစ်ခု စလုံးကို မျှတအောင် လုပ်သွား မှာဖြစ်ပါတယ် လို့ ပြောပြခဲ့ ပါတယ်။ ။
အီးယူကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဒုချီးရားတန်းရွာ လာရောက် လေ့လာ
Posted by drmyochit Friday, January 31, 2014, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ယခုလ အစောပိုင်းက ပြဿနာ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မောင်တောမြို့နယ် ဒုချီးရားတန်းကျေးရွာသို့ အီးယူကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ လာရောက်လေ့လာခဲ့သည်။
အီးယူကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များမှာ ယမန်နေ့နံနက်ပိုင်းက ရဟတ်ယာဉ်နှင့်ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မောင်တောဒေသခံ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက့ပြောသည်။
“ သူတို့ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ မနက် ၁၁ နာရီခန့်မှာရောက်ပါတယ်။ ရောက်ရောက်ချင်းဘဲ ဒုချီးရားတန်း ဘင်္ဂလီရွာကို ၀င်သွားပြီး ခဏအကြာမှာ ကားအစီး ၁၀ ကျော်နဲ့ မောင်တောမြို့ကို ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။ ဒီမှာ ခဏဘဲနေခဲ့ပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
ဒုချီးရားတန်းကျေးရွာသို့ အီးယူကိုယ်စားလှယ်များ သွားရောက်ခဲ့စဉ် အမျိုးသမီး တချို့နှင့်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့သည်ဟု သူတို့ခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါ သတင်းယူခဲ့သူ သတင်းထောက် ကိုဖိုးသီဟက ပြောသည်။
“ သူတို့အဖွဲ့မှာ အီးယူသံအမတ်အပါအ၀င် သံအမတ် ၇ ဦးပါတယ်။ သူတို့ ဒုချီးရားတန်း ရွာကအမျိုး သမီး တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါ အဓိကသူတို့မေးတာက ယောင်္ကျားတွေ ဘယ်ရောက်နေလဲ။ လူတွေ အသတ်ခံရတယ် ဆိုတာ ဟုတ်သလား ဆိုတာကို မေးသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ အမျိုးသီးကတော့ သူတို့ယောင်္ကျားတွေ ထွက် ပြေးနေကြတယ်။ ဘာကြောင်းလည်းဆိုတော့ ဖမ်းမှာကိုကြောက်လို့ ပြေးနေကြတယ်လို့ဘဲ ပြော တာတွေ့ရ ပါတယ်” ဟုယင်းက ဆိုသည်။
အီးယူကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား မောင်တောမြို့ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင်လည်း ဒုချီးရားတန်းကျေးရွာ ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး အာဏာပိုင်များမှ ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်း ကိုဖိုးသီဟက ယခုကဲ့သို့ ဆက်ပြောသည်။
“ ခရိုင်ရုံးမှာ ရှင်းလင်းတဲ့အခါတော့ အမှတ် (၄) ရဲတပ်ရင်းမှူး ဦးတင်ကိုကိုက ရှင်းပြပါတယ်။ ဦးတင်ကိုကို ရှင်းတာကတော့ ရဲတပ်ကြပ်ကြီး အောင်ကျော်သိန်း ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အကြောင်း ကိုအသေး စိတ်ရှင်းပါတယ်။ နောက်ပြီး နိုင်ငံခြားမီဒီယာက ရေးတဲ့သတင်းဟာ မဟုတ်ဆိုတာတွေကို ရှင်းပြ ပါတယ်။ အီးယူဘက် ကတော့ ရဲတပ်ကြပ်ကြီး ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို အသေးစိတ်မေးပါတယ်။ အီးယူဘက်က ရဲတပ်သားတွေ ကို အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေး သင်တန်းတွေပေးနေတယ်။ အဲဒီ သင်တန်းကို ဒီကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ မတက်ကြဘူး လားဆိုတာတွေကို မေးသွားတယ်” ဟု ဆိုသည်။
မောင်တောခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူရုံးတွင် ပြုလုပ်သည့် ရှင်းလင်းပွဲအပြီး နေ့လည်ပိုင်းတွင် အီးယူကိုယ် စားလှယ်များ မောင်တောမြို့မှ ထွက်ခွာသွားကြောင်း သိရသည်။
ဇန်န၀ါရီ ၂၉ ရက်နေ့ကလည်း အီးယူကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် စစ်တွေမြို့မှ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် စစ်တွေဟိုတယ် တွင် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ယင်းတွေ့ဆုံပွဲတွင် စစ်တွေမြို့မိမြို့ဖများဘက်မှ ယခင်စစ်အစိုးရကို ဖိအားပေးလို၍ လူ့အခွင့်အရေး ကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး ဘင်္ဂလီများဘက်မှ တဖက်သတ် ဘက်လိုက်ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုများကို ယခုလို ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံအဖြစ် တည်ဆောက်နေ သည့်ကာလမျိုးတွင် မပြုလုပ်သင့်ကြောင်း။ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ တစ်ရပ်သည် မိမိလူထု၏ဆန္ဒ နှင့် အုပ်ချုပ်ရမည်လား နိုင်ငံတကာဆန္ဒနှင့် အုပ်ချုပ်ရမည်လား ဆိုတာကို ဒီမိုကရေစီ EU နိုင်ငံများ နားလည်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် EU ဥရောပသံတမန်တို့ အနေ ဖြင့် လိမ်လည်လုပ်ကြံထားသည့် အတည်မပြုနိုင်သော သတင်းများကို ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် သုံးသပ်ပြီးမှ ကြေငြာချက်များ ထုတ်သင့်သည် ဆိုသည့် အချက်များအပါအ၀င် လတ်တလော အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး တင်ပြခဲ့ကြကြောင်း အီးယူကိုယ် စားလှယ် များနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် စစ်တွေမြို့မှ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးသန်းထွန်းက သူ၏ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားသည်။
(နိရဉ္စရာ- ၃၁ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၄) / မောင်အေး
ဒုချီးရားတန်းရွာ မီးရှို့မူ ရဲတွေကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင် စွပ်စွဲ
Posted by drmyochit Friday, January 31, 2014, under ပြည်တွင်းသတင်းများ |2comments
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ် ဒုချီးရားတန်း အနောက်ရွာမှာ ဒီလ ၂၈ ရက်နေ့ ညနေက မီးရှို့မူ တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အိမ်ခြေ ၁၆ ဆောင် မီးထဲပါသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီမီးရှို့မူဟာ ရွာကို ရဲတွေ ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အတွက် အပြင်လူ ၀င်လာစရာမရှိတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်က ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာအသံ DVB နဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်းမှာ စွပ်စွဲ ပြောကြားပါတယ်။
ရဲတွေကိုယ်တိုင် ပါဝင် ပတ်သက်နေတဲ့ အကြောင်း ဥင်္ီးရွှေမောင်က ခုလို ပြောဆိုပါတယ်။
“ ရဲကထိမ်းချုပ်ထားတဲ့အတွက် အပြင်လူဝင်လာနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ အပြင်လူဝင်ပီးမှ မီးရှို့ရင်လည်း ဒါကို ရဲကမိမှာပေါ့။ ဒါတစ်ချက်။ နောက်တချက်က အဲဒီ အနီးပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေက ကျွန်တော့်ကို ဖုန်းဖြင့် သေချာခိုင်မာတိကျစွာ သတင်းပို့တာကတော့ အဲဒီ ရဲတွေကိုယ်တိုင် မီးရှို့နေတာကို သူတို့ကိုယ်တိုင်မြင် တယ်တဲ့။ ဒါက ဒီသတင်းစာရှင်းပွဲရှိလို့ တိုက်ဆိုင်ပီးမှ လုပ်နေတာလို့ သုံးသပ်မလား။ သို့မဟုတ် ကျွန်တော်ပြောတဲ့ ဟာကိုလည်း သုံးသပ်ပြီးမှ၊ ဒါ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ဒီလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ သူတို့ကိုယ်တိုင် မရှို့ရင်တောင်မှ သူတို့ရဲ့ပေါ့ဆမှု။ မဟုတ်ရင် သူတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ သို့မဟုတ် အခြားရွာအပြင်ကလာတဲ့ သူတွေကိုမှ သူတို့က မသိသလိုနေပြီး တော့ မီးရှို့မှုတွေဖြစ်သွားပြီးတော့ ပြဿနာကို ရှုပ်သထက် ရှုပ်ထွေးအောင် ဖန်တီးတာဘဲလို့ ကျွန်တော်က အဲလိုဘဲ ပြောချင်တယ်။”
ဒီသတင်းကို DVB သတင်းထောက် ဒေါ် ခင်ရူပါကနေ DVB TV ကနေ ဒီလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး အဲဒီလင့်မှာ http://www.youtube.com/watch?v=W_l56XGqxNk&feature=youtu.be မှာ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
ခုလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဆင့်မြင့်ဆုံး လွှတ်တော်မှာ ဥပဒေပြုနေတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးက တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဆောင်ရွက်နေတဲ့ နိုင်ငံဝန်ထမ်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ခုလို ပြည်သူပိုင် အိမ်ယာတွေကို မီးရှို့တယ်လို့ လူသိရှင်ကြား စွပ်စွဲလိုက်တဲ့ အတွက် နောက်ဆက်တွဲ ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ အများပြည်သူတွေက အထူး စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
(နိရဉ္စရာ- ၃၁ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၄)
အိပ်ပျော်နေစဉ်ယောင်ပြီးလမ်းထလျှောက်ရာမှာ လှေကားပေါ်က ပြုတ်ကျလို့ အရိုး ရှစ်ချောင်းကျိုးသွားသော်လည်း မနိုးခဲ့သူ
Posted by drmyochit Friday, January 31, 2014, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ဇန်န၀ါရီ ၃၁ ရက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်
မိုရက်ဂ်ဖစ်ရှာ ဆိုတဲ့ အသက် ၄၀ အရွယ် ကလေးအမေတစ်ယောက်ဟာ သူငယ်ချင်းနဲ့ အတူ အိပ်ပျော်နေ ရင်းနဲ့ ယောင်ပြီးလမ်းထလျှောက်ရာမှာ လှေကားပေါ်က ပြုတ်ကျပြီး သေစေနိုင်လောက်တဲ့ ဒဏ်ရာတွေ ရခဲ့ပေမယ့် အိပ်ပျော်နေရာက မနိုးလာခဲ့ပါဘူး။
ကျောရိုး၊ လည်ပင်းရိုး ၊ သွား ၊ နှာခေါင်းရိုး နဲ့ ပါးရိုး တွေ ကျိုးသွားတဲ့အပြင် ခြေကျင်းဝတ် လည်သွားတဲ့ အထိ ပြင်းထန်စွာ သေစေနိုင်လောက်တဲ့ ဒဏ်ရာတွေ ရရှိခဲ့ပေမယ့် ဖစ်ရှာဟာ ကံကောင်းထောက်မစွာပဲ အသက်ရှင် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပိုပြီး ထူးဆန်းတာတစ်ခုကတော့ သူဟာ လှေကားပေါ်က ပြုတ်ကျပြီး ဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ သွေးအိုင်ထဲ လဲနေခဲ့တာတောင် အိပ်ပျော်နေရာက မနိုးခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဖစ်ရှာ ဟာ ဆိုးရွားတဲ့ ဒဏ်ရာတွေ ရရှိခဲ့ပေမယ့် နော်တင်ဟမ်ဆေးရုံမှာ ဆယ်ရက်သာ တက်ရောက်ကုသခဲ့ပြီး နောက်နှစ်လလောက်အတွင်း အလုပ်ပြန်ဆင်းနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခုတော့ ဖစ်ရှာရဲ့ အိမ်လှေကားအတက်အဆင်းမှာ သူမအတွက် ကလေးတွေပြုတ်မကျအောင်တပ်ဆင်တဲ့ တံခါးငယ်လေးတွေကို နောက်ထပ်ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်လို့ တပ်ဆင်ပေးထားရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အသက်ခြောက်နှစ်အရွယ် သမီးငယ်နဲ့ တူတူနေထိုင်တဲ့ ဖစ်ရှာဟာ သူမ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး မကြာခဏ အိပ်နေရင်းလမ်းလျှောက်တတ်ပြီး အထူးသဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုယောင်ပြီးလမ်းလျှောက် လေ့ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by drmyochit Friday, January 31, 2014, under နည်းပညာ | No comments
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။ သူ့အကောင့်ကို ဆုံးရှုံးရတော့မယ့် ကိန်းရှိလို့ပါတဲ့။ အဲဒါ ဘာတွေ လုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ မေး လာပါတယ်။ လုပ်စရာ သိပ်အများကြီး မရှိပါဘူး။ အကောင့်အခိုးခံရဖို့ အခြေအနေ များနေသူများအတွက် ပြုလုပ်ရမယ့် ကာကွယ်ရေးအဆင့်များကတော့ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Primary Email ပြောင်းပါ
အဓိကအကျဆုံး လုပ်ရမယ့် အလုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ Account Setting ကိုဝင်၊ General Tab ကနေပဲ Name, Usernam, Email, Password အစရှိသဖြင့်တို့ကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဒီတော့ Email ကို Edit လုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ လက်ရှိ မိမိ Log in ဝင်နေကျ Email ကိုဖြတ်ရပါမယ်။ ပြီးရင် မိမိ ပြောင်းလဲချင်တဲ့ Email ကို ရိုက်ထည့်ပေး ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် Password တောင်းပါတယ်။ Password ထည့်ပြီး save လိုက်တဲ့အခါ အရင် အီးမေးလ် အဟောင်းသို့မဟုတ် အသစ်ထည့်လိုက်တဲ့ အီးမေးလ် အဟောင်း သို့မဟုတ် ၂ ခုစလုံးဆီကို စာပို့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ပြောင်းလဲမှုအတွက် Confirm လုပ်ပေးဖို့အတွက်ပါ။ ဒီတော့ Email အဟောင်းကော၊ အသစ်ကိုပါ စစ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Password ပြောင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပိုပြီးလုံခြုံမှုရှိမယ့် Password ကိုရွေးရမှာပါ။ မိမိရဲ့  မွေးသက္ကရာဇ်တို့ အမည် တို့ ပါနေတဲ့ Password တွေဆိုရင်မလုံခြုံပါဘူး။ aA1@%com အစရှိသဖြင့် အများခန့်မှန်းရ ခက်ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း အလွတ်ရဖို့အဆင်ပြေမယ့် စာမျိုးကို ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Security enable လုပ်ပါ
General ရဲ့ အောက်မှာ Security ဆိုတဲ့ tab လေးရှိပါတယ်။ သူ့ကို click နှိပ်ပြီး
- Secure Browsing ကို Enable လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ သူက ပိုလိုခြုံတဲ့ အင်တာနက် ပရိုတိုကော https ကို ဘယ်အချိန်ဖွင့်ဖွင့် ပို့ပေးမယ့် စနစ် ဖြစ်ပါတယ်။
- ပြီးတော့ Login Notification ကိုလည်း enable လုပ်ရပါမယ်။ ဒါမှ ကိုယ်မရှိတဲ့အချိန် တစ်ယောက်ယောက်က Log In ပြီဆိုရင်လည်း အီးမေးလ်ပို့ပြီး Alert လုပ်ပါတယ်။
- Trusted Contact ရွေးပါ။ သူက ကိုယ့်အကောင့်ထဲကို ဝင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင် Trust ရွေးထားတဲ့ friend တွေဆီကို ကုဒ်ပို့ပါတယ်။ သူတို့က ရရှိတဲ့ကုဒ်နဲ့ ပြန်ဖွင့်ရင် အကောင့်ပြန်ရပါတယ်။ အပြင်မှာ တွေ့ဆုံတဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
App တွေ ဖြုတ်ပါ
App မှာ ကိုယ်ဆော့နေကျ App ကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဆော့လေ့ဆော့ထ မရှိတဲ့ Application, အသုံးမပြုဖြစ်တဲ့ App တွေကို Remove လုပ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ သူ့ကို App section မှာ ဝင်ပြီး Edit လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Facebook အကောင့်ကတော့ လုံခြုံသွားပြီ။ ကိုယ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ Email သာ မလုံခြုံဘူးရင်လည်း အိတ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက်သလို ပဲ ဖြစ်မှာပါ။ Log in ဝင်ဖုိ့ အသုံးပြုနေကျ Email ကို လုံခြုံမှုရှိအောင်လည်း ပြုလုပ် ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Facebook Security သုံးပါ
Security on Facebook လို့ Search bar မှာရိုက်ထည့်လိုက်ရင် Facebook ရဲ့  Official Security App page ကို ရောက်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းမှတစ်ဆင့် Password ပြောင်းလဲခြင်း၊ အမည်ပြောင်းခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ပြီး Security အတွက် စိတ်ကြိုက် Edit ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အကောင့်သုံးပြီးတိုင်း sign out သေချာပါစေ
မိမိ ရဲ့  တစ်ကိုယ်ရေသုံး ဖုန်း၊ ကွန်ပြူတာတို့ဆိုရင်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ သူငယ်ချင်း ပစ္စည်း၊ အများသုံး ပစ္စည်းတွေကနေတစ်ဆင့် သုံးပြီးပြီဆိုရင် Sign out သေချာဖို့လိုပါတယ်။ Browser history ကိုဖြတ်ခဲ့တာ အကောင်းဆုံးပါ။
Link ပေးတိုင်း မနှိပ်ပါနဲ့
ဒါ လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ မိမိအကောင့်က အခိုးခံရမယ့်အနေ အထားလို့သိနေရင် Message box က ပေးလာတဲ့ Link တွေကို အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သေချာ ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ Link မျိုးပဲ နှိပ်သင့်ပါတယ်။ လက်တလော Celebrity အကောင့်များ ပျောက်ခြင်းက Link တွေဆီ ဆက်သွားပြီး Log in လုပ်လို့ပါ။ ဒီတော့ ဆင်ခြင်ဖို့အထူးလိုအ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် မိမိ အကောင့်အခိုးခံရမယ့် အခြေအနေမှာ ကင်းဝေးပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အထင်ကြီးခြင်းနဲ့ နှစ်သက်ကျေနပ်ခြင်းတွေ ရှိတဲ့ ပထမပိုင်းလအနည်းငယ် ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့ အချစ်ရေး ဆိုတာ ထင်သလောက် မလွယ်ကူတော့ပါဘူး။ အနေဝေးနေကြတဲ့ ချစ်သူမျိုးတွေအတွက်ဆို ပိုလို့တောင်မှ ခက်ခဲပါသေးတယ်။
အချစ်ရေးဆိုတာ စိတ်ခံစားမှုတွေ အရင်းအနှီးကြီးစွာ မြှုပ်နှံထားရတဲ့အရာပါ။ အချစ်ရေးတစ်ခု တည်ဆောက် တဲ့နေရာမှာ အားထုတ်မှုတွေလည်း အများအပြား လုပ်ရပါသေးတယ်။ အထင်ကြီးခြင်းနဲ့ နှစ်သက်ကျေ နပ်ခြင်းတွေ ရှိတဲ့ ပထမပိုင်းလအနည်းငယ် ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့ အချစ်ရေး ဆိုတာ ထင် သလောက် မလွယ်ကူတော့ပါဘူး။ အနေဝေးနေကြတဲ့ ချစ်သူမျိုးတွေအတွက်ဆို ပိုလို့တောင်မှ ခက်ခဲပါသေးတယ်။
အဖြေရှာကြည့်တဲ့အခါ အနေဝေးသူတွေမှာ ချစ်ခရီးလမ်းတစ်ခုအတွက် လိုအပ်တဲ့အရာတွေ မလုံလောက်တဲ့ အဖြစ်မျိုး ရှိနေကြပါတယ်။
(၁) လုံလောက်တဲ့ ဆက်သွယ်မှု မရရှိခြင်း
ခိုလေးတွေနဲ့စာပို့တဲ့ခေတ် မဟုတ်တော့သလို ပီဇာမှာရင်တောင် နာရီဝက်ထက် နောက်မကျပဲ အိမ်တိုင်ရာရောက် လာပို့တဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ဆက်သွယ်မှု မလုံလောက်ဘူးလို့ ပြောလိုက်ရင် လက်ခံချင်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်။ သင်တို့မှာ စမတ်ဖုန်းကိုယ်စီရှိကြတယ်။ ဖေ့ဘုတ်စ် ၊ gtalk စတဲ့ application တွေလည်းစုံလို့။ တစ်နေကုန် ဒီapplication တွေသုံးလို့ စကားပြောနေတယ် ဆိုဦး ပြည့်စုံတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှု ရရှိလို့လား။ လအနည်းငယ်အကြာမှာ ဒီလိုချည်းပဲ အမြဲတမ်းဝေးနေမယ် ဆိုရင်တော့ တခြားမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခု ရှာဖွေကြည့်ဖို့ လိုလာပြီလို့ စတင်ခံစားမိလာပါလိမ့်မယ်။
(၂) ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု ကင်းမဲ့လာခြင်း
လိမ်လည်ဖို့ အခါအခွင့်သင့်ပြီး အခြေအနေပေးလာတဲ့အခါ သင့်အနေနဲ့ သူမမသိသေးသရွေ့ ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်နေလိမ့်မယ်။ ဒီအခါ သစ္စာရှိမှုနဲ့ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး ကတိထားမှုတွေဟာ အချိန်တိုင်းမှာ ပျက်ပြယ်နေတတ်ပါတယ်။ တစ်လင်တစ်မယားဆိုတဲ့ စနစ်အပေါ်မှာ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိလာပါတယ်။ ဒါတွေကို ကြံ့ကြံ့မခံနိုင်တဲ့အခါ သင်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ အဖုအထစ်တွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
(၃) အတူတကွ တည်ဆောက်နိုင်သော ရေရာတဲ့အနာဂတ် မရှိခြင်း
သင့်ရဲ့ လူနေမှု ဘ၀ပုံစံ၊ ရွေးချယ်မှုနဲ့ အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေ ကြားမှာ နောက်ထပ် ဆုံတွေ့နိုင်ဖို့ သေချာတဲ့ အကြောင်းပြချက်မရှိနိုင်တော့ဘူး။ သင်တို့ရဲ့ ဘ၀နှစ်ခုဟာ မျဉ်းပြိုင်တွေလို ပဲ ဆုံမှတ်တစ်ခုထားဖို့ ခဲယဉ်းလာတဲ့အခါ ဒီဆက်ဆံရေး အေးခဲသွားပါလိမ့်မယ်။ နှစ်ဦးသားမှာ ဆုံတွေ့ချင်စိတ် အမှန်တကယ် ရှိနေကြတယ်ဆိုဦးတော့ အချစ်ထက် ဦးစားပေးရမယ့် အရာတွေ ဘ၀မှာကြုံလာတဲ့အခါ ရင်နာစွာနဲ့ ဒီလမ်းကို ရွေးချယ်ရတတ်ပါတယ်။
(၄) သံသယတွေ ၀င်လာခြင်း
သူမတကယ်ပဲ အတန်းတက်နေတယ်လို့ သင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ သူမကို အမြဲတမ်း စိတ်မကုန်နိုင်သူ တစ်ယောက်နဲ့ ပါတီမှာ ရှိနေတာများလား။ သူမ လိမ်နေတာများလား။ ဒီလိုပဲ အနေဝေးနေတဲ့ ဆက်ဆံရေးဆိုတာ သံသယတွေများစွာနဲ့ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ သင်တို့နှစ်ဦးရဲ့ ဆက်သွယ်မှု မလုံလောက်တော့တဲ့ အချိန်ကစလို့ သူမရဲ့ သစ္စာရှိမှု ၊ သံယောဇဉ်ရှိမှုတွေ အပေါ် အမြဲလိုလို သံသယ၀င်နေပါလိမ့်မယ်။
(၅) ဆက်လက်တည်မြဲဖို့ ဆန္ဒမရှိတော့ခြင်း
ဆယ်ကြိမ် စကားပြောကြတဲ့အခါ ကိုးကြိမ်လောက်က ရန်ဖြစ်နေရမယ်။ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အပျော်ရှာမိတာတွေ ၊ သံသယ၀င်မိတာတွေ ၊ ဆုံတွေ့ဖို့အခွင့်အလမ်း နည်းပါးလာတာတွေကို အခြေခံလို့ သင်တို့ဟာ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး သည်းခံနိုင်စွမ်းနဲ့ ချိုသာပြေပြစ်စွာ ပြောဆိုနိုင်စွမ်းတွေ ကင်းမဲ့လို့ နေပါပြီ။ ကြာလာတော့လည်း ငြင်းခုံရတာတွေ ၊ ရန်ဖြစ်ရတာတွေကို ငြီးငွေ့လို့ လာပါပြီ။ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး အသည်းခွဲလိုတဲ့ ဆန္ဒ မရှိကြသော်လည်းပဲ သင်တို့ရဲ့ ဒီအချစ်ရေးကြီးက အဓိပ္ပါယ်မဲ့လာတယ်လို့ ထင်နေကြပါပြီ။ ဒီအခြေအနေဟာ နှစ်ဦးစလုံးအတွက် စိတ်ဆင်းရဲစရာ အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့် တစ်ယောက်ယောက်ကစလို့ သွားခွင့်ပြုလိုက်ပါတော့။
ဒီတော့ အနေဝေးနေတဲ့ ချစ်ခြင်းတစ်ခုကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါ အရေးအကြီးဆုံး ကတော့ သစ္စာရှိမှုပါ။ မမြင်ရ ၊ မတွေ့ရသော်လည်းပဲ သူဟာ ကိုယ့်အပေါ် ကတိတွေချိုးဖောက် နေတယ်ဆိုရင် အလိုလို ခံစားမိတတ်ကြပါတယ်။ ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ အဆင်ပြေအောင် တတ်နိုင်သမျှ ညှိယူလို့ရကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာလေးတွေ သိထားတဲ့အခါ ကြိုတင်ရှောင်ရှားရင်း ပြင်ဆင်လို့ရနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
သမီးကို မိန်းမဘ၀ပြန်ပြောင်းပေးနိုင်ရင် ဒေါ်လာသန်း (၈၀) ဆုချမယ်
သူဌေးကြီးနဲ့ ချောင်ဇီဇူးနဲ့ ယောက်ျားလျှာသမီး ဂီဂီချောင်
ဟောင်ကောင်က ဘီလျံနာသဌေးကြီးက ယောက်ျားလျှာဖြစ်နေတဲ့ သူ့ သမီးကို ပုံမှန်အမျိုးသမီးဘ၀ စိတ် အခြေ အနေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်သူကို ဆုငွေ ဒေါ်လာသန်း ၈၀ ပေးမယ့်လို့ ကမ်းလှမ်းထား ပါတယ်။ အရင်က သန်း ၄၀ကမ်းလှမ်းရာကနေ ခုနောက်ထပ်သန်း၄၀ထပ်တိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
သမီးဖြစ်သူ ဂီဂီချောင်၊အသက် ၃၄နှစ်က သူ့ လို့ ယောက်ျားလျှာတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ထားပါတယ်။
သူဌေးကြီး ကသူ့ သမီးယောက်ျားလျှာတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ထားတာကို လက်မခံပဲ သူ့ သမီးအပျိုပဲလို့ဇွတ်ငြင်းနေ ခဲ့ပါတယ်။ အသက်၇၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမယ့် အဖိုးကြီးကလည်းခေသူတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မိန်းမပေါင်း တစ်သောင်းနဲ့ အိပ်ဖူးတယ်လို့ ဖွင့်ဟ၀န်ခံထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂီဂီက သူ့ အဖေသူ့ အတွက်ယောက်ျားရှာပေးတော့ပထမရီမောနေခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ သူ့ အဖေဆီ ကိုဟောင်ကောင် မောနင်းပိုစ်သတင်းစာကနေ သူ့ ဘ၀လမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုကိုလက်ခံပေးဖို့အိတ်ဖွင့်စာတစ် စောင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
"မိန်းကလေးချင်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကိစ္စကို အဖေနားလည်ရခက်နေမယ်ဆိုတာ သမီးသိပါတယ်။ ကျမလည်း အဖေနားလည်အောင်ရှင်းမပြတတ်ဘူး။ ဒါကငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနူးနူးညံ့ ညံ့နဲ့ နှစ်ပေါင်းများ စွာကြာပြီးမှ ပေါက် ဖွားလာခဲ့တာပါ။ ကျမတို့ တယောက်ကိုတယောက် အရမ်းချစ်နေကြဆဲပါ။အဖေနားလည်ဖို့ ခက်နေပေမယ့် ဒီကိစ္စဟာအမှန်တရားလို့ လက်ခံလိုက်ပါ။"
"အဖေကကျမခုလိုမိန်းကလေးချင်းတွဲနေတာ ဟောင်ကောင်မှာ ကျမအတွက်သင့်တော် မယ့်ကောင်းမွန်တဲ့ ယောက်ျားကောင်းမရှိဘူးလို့ အဖေထင်မြင်သွားတာကိုကျမစိတ်မ
ဂီဂီချောင်ဟာ သူနဲ့ နှစ်ရှည်လများတွဲခဲ့တဲ့ ရှောင်နဲ့၂၀၁၂က ပဲရစ်မှာ အခမ်း အနားကျင်း ပ လက်ထပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
the melting pot4U
ဂီဂီချောင်နဲ့ သူ့ ရည်းစားရှောင်
မြန်မာပြည်တွင် စွန့်ဦးတီထွင်သူတို့ ပေါ်ထွက်မလာသည့် အကြောင်းအရင်း
Posted by drmyochit Friday, January 31, 2014, under သတင်းများ | No comments
မြန်မာပြည် မှာ Entrepreneur တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ လူတိုင်း ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲ အချို့ ကို တင်ပြပေးလိုက် ရပါတယ်။
ကူညီထောက်ပံ့တယ်ဆိုတာ Entrepreneur များအတွက် မရှိမဖြစ်လို အပ်ပါတယ်။ တစ်နည်းပြောရင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူလုိ့လည်း နားလည်နိုင် ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင် Product တစ်ခုကောင်းကောင်း ထုတ်ဖို့ ရေး ဆွဲထားတဲ့ Project ကို ထုတ်ပြပြီး Private Investor ကိုပြရင်ပြမယ်။ သူမှမရလည်း အစိုးရ ဘဏ်တွေ ဆီ တိုက်ရိုက်သွားပြီး ရှင်းပြတဲ့အခါ အကြောင်းအချက်ခိုင်လုံ ရင် ငွေထုတ်ချေး ပါတယ်။ မြန်မာပြည် မှာလည်း မချေးဘူး မဟုတ်ဘူး။ ချေးပါတယ်။ အစိုးရဘဏ်မှ ငွေတိုးနဲ့ချေးနိုင်ပေမယ့် အဲ့ဒီလို ချေးနိုင်ဖို့ အတွက် အိမ်ဂရန် အပေါင်ထားတာတို့၊ ဟိုလူကပ်၊ ဒီလူကပ် လုပ်ရတာတို့၊ လမ်းကြောင်းရှာ ရတာ တို့ အစရှိသဖြင့် အခက်အခဲ များစွာကြောင့် ကိုယ်တိုင်လည်း အရင်းမထုတ်နိုင်၊ အရင်းထုတ်နိုင် သူကိုလည်း ရှာမတွေ့ ၊ ဘယ်ကနေမှ လည်း ငွေချေး မရနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ဘာမှမလုပ်တော့ပဲ နေလိုက်ကြ ပါတယ်။
အကြံတူ နောက်လူ အသာစောင့်ခြင်း
ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ပေါ့။ ရပ်ကွက်တစ်ခုထဲမှာပဲ တစ်ယောက် အင်တာနက် ဆိုင်ဖွင့်တယ်။ တစ်နာရီ ၄၀၀ ကျပ်။ ဆိုင် အင်မတန် ဝင်ငွေကောင်း တာတွေ့တောင် နောက်လူကလည်း မနီးမနားနေရာမှာ အင်တာနက်ဆိုင် လိုက်ဖွင့် တစ်နာရီ ၃၀၀ ကျပ်၊ အဲယားကွန်းအေးအေးဆက်ဆက်လေး လည်း ရှိတော့ ၃၀၀ တန်ဆိုင်ကို သွားကြလေရော။ Web Service ကုမ္မဏီတစ်ခု ဝဘ်ဆိုဒ် တစ်ခုကို ၁၀ သိန်းနဲ့လုပ်တယ်။ အရောင်း အဝယ်ဖြစ်၊ အောင်မြင်တာတွေ့တော့ Website တစ်ခု ၅ သိန်းနဲ့ အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုပါ တွဲပေးလိုက်တယ်။ နယ်မြို့ လေးမှာ ဘိလိယက်ခုံဖွင့်တော့ လူလာများပြီး အောင်မြင်တယ်။ နောက်လူက အဲ့ဆိုင်လူစည်တာကြည့်ပြီး အဲယားကွန်းခန်း ဘိလိယက်ခုံဆိုပြီးတော့ ဖွင့်၊ အေးတဲ့နေရာကို လူပိုသွား။ ရွှေဇလပ် အမည်နဲ့ နေကြာစိ ထုတ်။ နောက်ကုမ္မဏီတစ်ခုက ငွေဇလပ် သို့မဟုတ်ရွှေဇလယ် အမည်နဲ့ နေကြာစိ ထုတ်။ အသံတူ ကြောင်းကွဲ လုပ်ပြီး ဈေးလည်း သက်သက်သာသာ လုပ်တော့ သူ ပိုအောင်မြင်တာပေ့ါ။
နောက်ဆုံးတော့ အကြံတူပေမယ့် နောက်လူက သာသာလို့ သွားပါတယ်။ သာရခြင်း အကြောင်းက ကနဦး တီထွင်ကြံစသူဟာ အိုင်ဒီယာ ဆက်မထုတ်နိုင်ခြင်း နဲ့ Investment ထပ်မထုတ်နိုင်ခြင်း နှစ်ခုပါ။ Idea ထပ်မထွက်တာကတော့ ကိုယ့်အပြစ်မို့ ပြောစရာမရှိပေမယ့် ၁၀ ယောက်စာ Customer အတွက်ပဲ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်သူဟာ အယောက် ၁၀၀ အတွက် မစွမ်းသာသေးပါဘူး။ ဒီတော့ စွမ်းသာတဲ့ လုပ်ငန်းစုတစ်ဖွဲ့က ဆင်တူတွေ လိုက်လုပ်တော့ စွန့်ဦးတီထွင်သူဆိုတာ ပျောက်ခြင်း မလှပျောက်ကုန်၊မွဲကုန် ကြ ပါတယ်။
ခိုင်မာသင့်လျော်သော နည်းဥပဒေ မရှိခြင်း
လုပ်တုန်းကတော့ အဖွဲ့နဲ့ သေချာ တိုင်ပင်ပြီး လုပ်ကြတယ်။ စိတ်ဝမ်းလည်း ကွဲကြရော၊ ပြဲကြရော လူတစ်လူ ငါတစ်မင်းဖြစ်တဲ့အခါ ငွေကြေး အရှုပ် အရှင်းတွေ၊ ထုတ်ကုန်အရှုပ်အရှင်းတွေ၊ အမည်အရှုပ်အရှင်းတွေ အားလုံး ရှင်းရတော့မယ်။ နည်းပဒေများစွာ ရှိပေမယ့် ငွေများသူဘက်က အမြဲနိုင် တဲ့ခေတ်ကို မကျော်လွှားနိုင်သေးတော့ စွန့်ဦးတီထွင်ဖို့ရာ ခက်ခဲ နေ ပါသေးတယ်။ မူပိုင်ခွင့် ပြဿနာ က အကြံတူခြင်း၊ ထောက်ပံ့သူ ရှိမရှိ ပြဿနာအပြင် နည်းဥပဒေ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလည်း အကြုံးဝင်ပါတယ်။ စာရေးဆရာ တစ်ယောက် သူ ကလောင်ထက်လို့ စာအုပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်တောင် အုပ်ရေ ၂၀၀၀ အတွက် သိန်း ၂၀။ ဒါကိုမတတ်နိုင်တော့ ထုတ်ဝေသူရှာ၊ ဒီလိုနဲ့ ဟိုရှာဒီရှာလုပ်ရင်း စာအုပ်သာ ထွက်သွားပေမယ့် အိင်္ကျီသစ်တစ်ထည် မရလိုက်ဘူး။ ထုတ်ကုန်ကောင်းကောင်း ရှိလို့ ကုမ္မဏီထောင်ချင်ပြီ မီဒီယာလား၊ ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လား၊ အစုအဖွဲ့လား ကုမ္မဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး၊ အမည်ကြေး၊ ခွင့်ပြုချက်အမိန့် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ကုန်ကျစရိတ်ကလည်း များတော့ စွန့်ဦးတီထွင်သူတို့ ခေါင်းအစားမခံပဲ ထမင်းပဲ ဆက်စားကြ ပါတော့တယ်။ အစိုးရက Entrepreneur များကို မြေတောင်မြောက်ပေးတဲ့ ဥပဒေမျိုးတွေ ချမှတ် ပေးဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
သိပ်အဝေးကြီး ရှာတွေးနေစရာ မလိုပါဘူး။ အနီးအနား တိုင်ပြည်များ ကိုပဲ လေ့လာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Product တစ်ခုရဖို့အတွက် Unplug မဟုတ်တော့ပဲ Team Work ကောင်းကောင်း တစ်ခု Build လုပ်လို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် သွားကြပါတယ်။ ငွေရှိရင် လုပ်ငန်းတစ်ခုစမယ်။ လိုအပ်တဲ့လူတွေကို ပိုက်ဆံပေးခန့်မယ်ဆိုတဲ့ ငွေရှိသူအချို့ ကြောင့် သူတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း Entrepreneur ဖြစ်မသွားသလို သူတို့လက်အောက်မှာ လုပ်တဲ့ သူတွေကလည်း Entrepreneur ဖြစ်မသွားပါဘူး။ လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ လုပ်သား ဆက်ဆံရေး level တစ်ခုသာ ဖြစ်သွားပြီး စိတ်ဝမ်းကွဲမှု များကြောင့် စွန့်ဦးတီထွင်မှုတွေ ပျောက်ဆုံး သွားပါတယ်။ အလုပ် တစ်ခုကို ရပြီဆိုရင်လည်း အဖွဲ့လိုက် ဝိုင်းလုပ်တာထပ် တစ်ယောက်တည်း လက်စွမ်းပြမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးရှိသူ များကလည်း ခရီးပန်းတိုင်တစ်ခု ကို တော်တော်နဲ့ မရောက်ပါဘူး။ စည်းစည်းလုံးလုံး ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်မှု မရှိခြင်း ကလည်း Entrepreneur များကို ပျောက်ကွယ် စေပါတယ်။
ဒါကတော့ ကာယကံရှင်ကိုပဲ အပြစ်တင်လို့ မရပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ က တော်ရုံငွေမရှိတဲ့အခြေအနေကနေ ချေးငွေယူလို့ စီးပွားဖြစ်အောင် ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တောင် အောင်မြင်ဖို့၊ ကျရှုံးဖို့က ၅၀:၅၀ ပါ။ အောင်မြင်ပြီး သား ကွန်ရက်တစ်ခုက အောင်မြင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး အခုမှ စတဲ့ Starter တွေ ကို သူတုိ့ Network ထဲ ပေးဝင်လိုစိတ် မရှိပါဘူး။ (အားလုံးကိုမဆိုလိုပါ) ဒီတော့ ကြိုးစားပန်းစားသာ မလုပ်ကိုင်ရင် ကြိမ်းသေ ကျရှုံးမှာပါ။ သို့ပေမယ့် ဒီနေရာမှာ ဘုရင့်နောင်ဖောင်နောက်ပြန်မလှည့် ကြိုးစားသူ အချို့ ကတော့ အောင်မြင် ပါတယ်။ အဓိကကတော့ စွန့်စား (Adventure) ချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တစ်ခု ရှိနေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်စိတ်၊ ကြောက်စိတ်ကြီုးစိုးနေသေး ရင်တော့ ဘယ်တော့မှ လုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်မလာပါဘူး။ အကြောင်းပြချက် တစ်ခုချင်းစီကို ဖတ်လို့ အားငယ်၊ စိတ်ပျက်နေမယ့်အစား တကယ် အောင်မြင်သော Entrepreneur ဖြစ်လိုသူ တစ်ယောက်က ဒီဘောင်အတွင်းကနေ ဘယ်လိုဖောက်ထွက်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားနေပါပြီ။
Entrepreneur များ မပေါ်ထွန်းအောင် တားဆီးတဲ့ အချက်များစွာ ရှိနေတာကို အုပ်ချုပ်ရေး နဲ့ ဥပဒေ ပြုရေးတို့က ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေး မယ်၊ ပြီးတော့ Entrepreneur များကလည်း စွမ်းစွမ်းတမံ ကြိုးစားမယ် ဆိုရင် မြန်မာပြည်ရဲ့  ရွှေရောင်လင်းလက်တဲ့ အနာဂတ်က တကယ်မဝေးတော့ပါဘူး။
အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ဖောက်ခွဲရေးသင်တန်းများ ပြုလုပ်မည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုး (၃)ဦးအား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၌ ဖမ်းဆီးရမိ
Posted by drmyochit Thursday, January 30, 2014, under သတင်းများ | No comments
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာနယ်စပ်တွင် အထူးစစ်ဆင်ရေးနှင့် ဖောက်ခွဲရေးသင်တန်းများ ပို့ချရန်အတွက် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှ လေကြောင်းခရီးဖြင့် လိုက်ပါလာသော ဘင်္ဂါလီလူမျိုး (၃)ဦးကို ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၌ လုံခြုံရေး အထူးတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသော (၃)ဦးမှာ အူဆမာန်၊ အူးမောဖာရူးနှင့် ဇော်မင်းတို့ဖြစ်ပြီး အာဖဂန် နစ္စတန် အခြေစိုက် အယ်လ်ကိုင်ဒါ တပ်ဖွဲ့တွင် အထူးတိုက်ခိုက်ရေးနှင့် ဖောက်ခွဲရေးသင်တန်းများ တက်ရောက်ပြီး (၃)နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကြောချက်များအရ ၎င်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် မေယုခရိုင်အား TALAIBAN IN ARKAN နိုင်ငံတည်ဆောက်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားမဝင်လမ်းကြောင်းမှ ဝင်ရောက်ကာ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ရန်နှင့် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ စစ်တွေမြို့များတွင် ဗုံးပြုလုပ်နည်း၊ လက်နက်ငယ် ပြုလုပ်နည်းများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ အူဆမာန်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အခြေစိုက် RSO သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့မှ ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဘန်ဒန်အီဒရီး၏ ညီဖြစ်ပြီး ဇာတိမှာ မောင်တော မြို့နယ် သီဟိုဠ်ကျွန်းကျေးရွာ အုပ်စု ဘက္ကာဂုံးနား ကျေးရွာမှ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကချင်စကားမပြောတတ်သော ဒေသခံရွာသားများအား KIA အဖွဲ့မှ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီး ငွေကြေးတောင်းယူ
Posted by drmyochit Thursday, January 30, 2014, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ကချင်ပြည်နယ် မံစီမြို့နယ် မိုင်းခေါင်ကျေးရွာနှင့် ခါ့ပရာကျေးရွာအကြား ခါ့ပရာကျေးရွာရှိ သစ်အ၀ယ်စခန်း များ၌ သစ်တင်ရောင်ချနေသော မံသာကျေးရွာနေ ရွာသား(၆)ဦးကို ဇန်န၀ါရီ ၁၃ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီ ခန့်တွင် KIA အဖွဲ့ဝင်များမှ ပြင်းထန်စွာ ထိုးကြိတ်ရိုက်ပုတ်နှိပ်စက်ပြီး ငွေခြောက်သောင်း တောင်းယူမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
``မိုင်းခေါင်ရွာ ရောက်ခါနီး ဆိုင်ကယ်ပျက်နေတဲ့ လူ(၂)နှစ်ယောက်တွေ့ တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့က ဆိုင်ကယ် ရပ်ပြီး ၀ိုင်းကြည့်ပေးတာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ KIA အဖွဲ့က စစ်သားတွေ ရောက်လာပြီး ဟိုမေးဒီမေး လုပ်တယ်။ ကျွန်တော် တို့က အမှန်အတိုင်း ဖြေတာပါ။ ဒါကို ကချင်လိုပြောပြီး ကျွန်တော်တို့ကို ရိုက်တော့တာပဲ´´ ဟု ဗန်းမော်ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသနေသော ကိုသန်းဝင်းက ပြောသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဒါ့ပရာကျေးရွာရှိ သစ်အ၀ယ်စခန်း၌ သစ်ရောင်းပြီး ပြန်လာသော ကိုသန်းဝင်း (၄၂)နှစ်၊ ကိုသန်းဇော်ဦး(၃၇)နှစ်၊ မောင်ဝင်းဆန်းဦး(၁၈)နှစ်၊ ကိုကျော်မြင့်(၃၅)နှစ်တို့သည် မိုင်းခေါင်ရွာ အနီးတွင် သစ်တင်ထားပြီး ဆိုင်ကယ်ပျက်နေကြသည့် ကိုတင့်ခိုင်(၃၅)နှစ်နှင့် ကိုသန်းစိုး(၃၂)နှစ်တို့အား ကူညီ ပေးနေကြစဉ် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်(၃)ဦး ရောက်လာပြီး တရုတ်မဆီ သစ်သွားရောင်းမှာပါဟု ပြောရုံဖြင့် ဘာမပြော ညာမပြော ၀င်ရိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
``လက်သီးနဲ့ထိုး၊ သေနတ်ဒင်တွေနဲ့ထုတော့ မလုပ်ဖို့တောင်းပန်ပါတယ်။ မရဘူး၊ ၀ါးလုံးနဲ့ထပ်ရိုက်လို့ ကျွန်တော်လည်း လဲကျသွားတယ်၊ သူတို့ စီးထားတဲ့ ပြောက်ကျားဖိနပ်တွေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ၀ိုင်းကန်ကြတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးကို ရစရာမရှိအောင် ရိုက်ကြတယ်။ ဘယ်ဘက်နားရွက်ကွဲပြီး နားခေါင်းသွေးတွေ ထွက်ကျ လာတယ်။ အသက်ရှုကြပ်ပြီး သတိလစ် သလိုဖြစ်သွားလို့ ရိုက်တာရပ်သွားတယ်´´ ဟု ကိုသန်းဝင်းက ဆက်လက် ပြောသည်။
၎င်းအား ၀ိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်ပြီး ကျန်(၅)ယောက်ဘက်သို့ ရိုက်ရန်လှည့်စဉ် ဆရာတို့ရယ် မလုပ်ပါနဲ့ဟု ပြောသော သန့်ဇင်ဦးကို မဲပြီး ပါးရိုက်နားရိုက် လက်သီးနဲ့ထိုးပြီး ဖိနပ်များနှင့်ကန်ကြောက်ကြကြောင်း၊ ဆရာ မဟုတ်ဘူး ဆလန်ကဘာကွ၊ ဆလန်ဘာဆိုတာ တိုက်နယ်မှူးကို ခေါ်တာဟုပြောပြီး သေနတ်ဖြင့် ရင်ဝကိုပစ် ခဲ့ကြောင်း၊ ကျည် မထွက်သောကြောင့် နောက်ထပ်ထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်ရာ မျက်နှာတစ်ပြင်လုံး ကွဲပြဲဖူးရောင်ပြီး နှာခေါင်း ရိုးလည်းကျိုးသွားကြောင်း၊ သွေးထွက် အရမ်းများ၍ အတော်လန့်သွားကြောင်းနှင့် မံသာကျေးရွာ ဆေးခန်း၌ ဆေးကုသမှုခံယူနေရကြောင်း သိရသည်။
``ကျွန်တော့်နား နှစ်ဖက်ကိုလည်း လက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့ အသကုန်ပိတ်ရိုက်ပြီး ၀ါးလုံးကွဲအောင် တောက်လျှောက် ရိုက်တယ်ဗျာ၊ အခုကျွန်တော့် နားတွေ အူနေတယ်၊ ခြေသလုံးတွေလည်း ရောင်နေတယ်။ ဘယ်မှမသွားနိုင် ဘူး´´ ဟု ကိုကျော်မြင့်က လည်း ပြောကြားသွားသည်။
ဗန်းမော်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံဝန်ထမ်းတစ်ဦးက``ဒဏ်ရာတွေက မြင်လို့တောင်မကောင်းပါဘူး။ အခုနှိပ်စက်ခံ ရတာက သာမန်ပြည်သူတွေပါ။ KIA က သေနတ်ကိုင်ထားပြီး အခုလို လူမဆန်စွာနှိပ်စက်တာကတော့ လက်ခံ စရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။ တကယ်တော့ ကချင်စကားမပြောတတ်လို့ နှိပ်စက်ခံရတဲ့သဘောပါ။ KIA က ကချင်စကား မပြောတတ်တဲ့ လူမှန် သမျှအပေါ် အခုလို ဆက်ဆံနေဦးမှာပဲ၊ အခုလို ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကို KIA ခေါင်းဆောင်တွေက ဖော်ထုတ်ပြီး ၀န်ချတောင်းပန်ခိုင်းရမှာပေါ့၊ လူသားချင်းစာနာသောအားဖြင့် ထိခိုက်နစ်နာ သူတွေကို ဆေးဖိုးဝါးခနဲ့ ဓါးပြတိုက်သလို တောင်းသွားတဲ့ ငွေတွေပြန်ပေးသင့်တယ်၊ လက်နက် အားကိုးနဲ့ လက်နက်မရှိတဲ့ ပြည်သူကို နှိပ်စက်တာလောက် အောက်တန်း ကျတာမရှိပါဘူး´´ ဟု ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
Posted by drmyochit Thursday, January 30, 2014, under ဗဟုသုတ | No comments
ယနေ့ ဂျာနယ်တစ်စောင်တွင် ဖတ်လိုက်ရသည်။ “မိမိယောကျာ်း အိမ်ကပ်စေချင်လား??? အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေချင်လား??? မိမိမှ မိမိ တန်းတန်းစွဲ ဖြစ်စေချင်လား” ဆိုသည့် ဗေဒင်ကြော်ငြာတစ်ခု။
မိမိတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက တော်တော်ဆိုးသည်။ လောကီမင်္ဂလာတွေ၊ ဗေဒင်တွေကို တော်တော်အားကို ကြသည်။ အိမ်ဝယ်မည်ဆိုလဲ ဗေဒင်မေးသည်၊ အိမ်ထောင်ပြုမည်ဆိုလဲ ဗေဒင်မေးသည်။ ယောကျာ်း အလုပ်ရှုပ်၍ အိမ်ပြန်နောက်ကျလဲ တောထင်တောင်ထင် ဗေဒင်မေးသည်၊ နောက်ဆုံး ကိုယ်ချစ်သူ ကိုယ့်နဲ့ စကားများရင်တောင် ဗေဒင်မေးသည်။
ကိုယ့်ယောကျာ်း အိမ်ကပ်အောင် ဗေဒင်ဆရာက ဘာလုပ်ပေးမည်နည်း??? အောက်လမ်းဆိုသည့် မကောင်းသည့် အတတ်ပညာနှင့်လား?? ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ယောကျာ်း အကုသိုလ်ကံများနေသည့် အချိန်ဆို ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ သို့သော် ကိုယ်ချစ်သည့်သူကို အောက်လမ်းနှင့် ပြုစားရက်ပါလား????
ဒါဆို ယတြာချေသည့် နည်းလော??? ဆိုလိုသည်က ဘယ်ဂြိုဟ်တိုင်တွင် ဘာကပ် ဘာလှူစသည့် နည်းလော?? သိပ္ပံခေတ်လူသား တစ်ယောက်အနေနှင့် စမ်းစစ်ကြည့်သင့်သည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်တော်များတွင် အရဟံအစ ဘဂဝါအဆုံး ကိလေသာကုန်ခန်းအောင် လုပ်သည့် နည်းတွေပင်၊ ပူလောင်အောင် လုပ်သည့် နည်းမပါ။ မြတ်ဗုဒ္ဓက ဟောထားသည်။ “အတ္တဟိအတ္တနော နာထော” မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာတဲ့။ ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ်မည်နည်း??? မိမိ၏ ကံ၊ဥာဏ်၊ ဝီရိယကိုသာ အားကိုးသင့်သည်။
မိမိယောကျာ်း အိမ်ကပ်၊ သစ္စာရှိအောင် ကံအနေနှင့် မိမိကိုယ်တိုင် သစ္စာရှိသင့်သည်။ ကံကို ဖြည့်ကျင့်ပြီးလျှင် ဥာဏ်ကူ၍
(၁) သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနှင့် သေသေသပ်သပ် နေရမည်။
(၂) နှုတ်ပြောချိုသာ၍ ကိုယ်အမူရာသိမ်မွေ့ရမည်။
(၃) တစ်ဦးစကားကိုတစ်ဦး ဂရုစိုက်နားထောင်ရမည်။ လေးစားမှုအပြန်လှန်ရှိရမည်။
(၄) ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လျှင် ဒေါသကို ရှောင်ရမည်။
(၅) မိမိအိမ်ထောင်ဖက်၏ အပေါင်းသင်းတွင် အဆင်ပြေပြေ နေထိုင်တတ်ရမည်။
(၆) အိမ်ထောင်ရေး နိုင်နင်းရမည်။
(၇) စာများများဖတ်၍ သွက်လက် ဖျက်လက်ရမည်။ (နုံအသူ မဖြစ်စေရ)
၁။ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနှင့် သေသေသပ်သပ် နေရမည်။
ယောကျာ်းလေးများသည် မည်မျှချောမောနေပါစေ ညစ်ပတ်လျှင် မကြိုက်။ သေသေသပ်သပ်နှင့် သန့်သန့်ရှင်းရှင်းရှိလျှင် သဘောကျကျသည်။ ဆိုလိုသည်က မည်မျှချောမောပါစေ အစားစားလျှင် ပေတလူးခါနေလျှင် မကြိုက်ကြပေ။ မည်မျှချောပါစေ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်နေလျှင် သဘောမကျပေ။ ပါးတွင် မိတ်ကပ်မည်မျှ လိမ်းလိမ်း တစ်နေ့တစ်ခါမှ ရေမချိုးတတ်လျှင် သဘောမကျ။
၂။ နှုတ်ပြောချိုသာ၍ ကိုယ်အမူရာသိမ်မွေ့ရမည်။
မိန်းကလေးဖြစ်ပြီး နှုတ်ကြမ်းလျှာကြမ်းနှင့် ဆဲဆို၍ ရန်တွေ့တတ်လျှင် မည်သူမှ သဘောမကျ။
၃။ တစ်ဦးစကားကို တစ်ဦး ဂရုစိုက်နားထောင်တတ်ရမည်။ လေးစားမှု အပြန်လှန်ရှိရမည်။
ထိုအချက်လဲ အလွန်အရေးကြီးသည်။ ယောကျာ်းလေး တော်တော်များများသည် ကိုယ်ဖြစ်ချင်သည့် အရာကို တကူးတက မပြောတတ်။ နေ့စဉ် ပြောဆိုနေကျ စကားများတွင် ပြောပြောတတ်သွားသည်။ ဥပမာ-- တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ပြောဆိုနေကျအတိုင်းတွင်ပင် ငါအခုသလော အလုပ်တွေပင်ပန်းတယ်ကွာဆို၍ ညှပ်ပြောတတ်သည်။ ထိုအရာကို ဂရုစိုက် နားမထောင်တတ်ပဲ အလုပ်မှ ပြန်ရောက်၍ ဟိုလိုက်ပို့ ဒီလိုက်ပို့ခိုင်းလျှင် မကြိုက်တော့ပေ။
၄။ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လျှင် ဒေါသကို ရှောင်ရမည်။
ထိုအရာတော့ လူတိုင်းနားလည်သည်။ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာလျှင် ဘာမှ မပြောသည်က ကောင်းသည်။ ထိုစကားကို နောက်နေ့မှပြောလဲ နောက်မကျ။ ထိုသို့မှ မဟုတ်ပဲ ပြဿနာဖြစ်ဖြစ်ခြင်း ဒေါနှင့်မောနှင့် ပြောလျှင် တစ်ဦးသိက္ခာတစ်ဦးချ၍ ပြောဆိုတတ်လာသည်။ ပြဿနာဖြစ်လာလျှင် နောက်နေ့မှ ပြောရအောင်ကွာဆို၍ နောက်ဆုတ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံ ဖြစ်သည်။
၅။ မိမိအိမ်ထောင်ဖက်၏ အပေါင်းသင်းတွင် အဆင်ပြေပြေ နေထိုင်တတ်ရမည်။
မိမိအိမ်ထောင်ဖက်၏ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေကြားတွင် အဆင်ပြေပြေ နေထိုင်တတ်ရမည်။ မိသားစုကြားတွင် ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် မျက်နှာရအောင်၊ အပေါင်းသင်းတွေကြားတွင် မျက်နှာရအောင် နေတတ်ရမည်။ ဆိုလိုသည်က မိသားစုဆိုလဲ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် အဖေအမေကို နှုတ်ပြောချိုသာစွာ၊ ယဉ်ကျေးစွာဖြင့် နေကောင်းလား၊ ဘာလား နှုတ်ဆက်တတ်ရမည်။ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် အိမ်သွားလျှင် အိမ်မှုကိစ္စတွေကို ကိုယ်နိုင်ရာ ကူညီပေးတတ်ရမည်။ အပေါင်းသင်းတွေကြားဆိုလဲ အတတ်နိုင်ဆုံး ချုပ်ချယ်တာကို ရှောင်သင့်သည်။ အပေါင်းသင်းတွေကြားထဲ “ရှင့်ကို ဘာမလုပ်နဲ့ ပြောထားတယ်မလား၊ ကျွန်မမကြိုက်ဘူးလေ” စသည့် နှစ်ကိုယ်ကြား ပြောသင့်သည့် ပြဿနာကို အများကြားတွင် မပြောသင့်။
၆။ အိမ်ထောင်ရေး နိုင်နင်းရမည်။
မိန်းကလေး တစ်ယောက်အနေနှင့် မချက်တတ် မပြုတ်တတ်ရင်တောင် ခိုင်းတတ်အောင်တော့ သင်သင့်သည်။ ဆိုလိုသည်က ကြက်သားဈေး၊ ဟင်းရွက်ဈေးတွေ အခုဆို ဘယ်လောက်ဆိုတာ၊ ဘယ်လိုချက်လျှင် ဘယ်လို အရာသာထွက်မယ်ဆိုတာ စသည်တို့ကို သိသင့်သည်။
၇။ စာများများဖတ်၍ သွက်လက် ဖျက်လက်ရမည်။ (နုံအသူ မဖြစ်စေရ)
မည်သည့် ယောကျာ်းလေးမှ နုံအအဆို မကြိုက်။ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်၏ အလုပ်တွေကို အကြံပေးတတ်အောင် စာများများ ဖတ်သင့်သည်။ ထိုသို့ မဟုတ်ပဲ တစ်ခုခုဆို ကျွန်မလဲ မသိဘူး၊ ကျွန်မလဲ မသိဘူးဆို အကြံပေးနိုင်သည့် သူငယ်ချင်းများနှင့် အပြင်မှာပင် အချိန်ကုန်မည်ဖြစ်သည်။
အထက်ပါ အချက်တွေနှင့် ပြည့်စုံလျှင် မည်သည့် ယောကျာ်းလေးမှ အိမ်မကပ်ပဲမနေ။ အိမ်၌ ပျော်အောင်ထားလျှင် အိမ်ကပ်မည်သာ။ ထိုသို့ ပြည့်စုံသားနှင့် သစ္စာဖောက်လျှင် သင် အတိတ်က သစ္စာဖောက်ခဲ့လို့ သစ္စာဖောက်ခံရလို့ပင်။ ကိုယ်ကောင်းသားနှင့် သစ္စာဖောက်သည့်လူကို ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေစရာ မလိုပေ။ ရေစက်ချ၍ အမျှဝေလိုက်ယုံပင်။
Credit To :ဘဝစာမျက်နှာ
စာနယ်ဇင်းသမား လူငယ်တွေကို စမတ်ကျစေချင်တဲ့ တင်မိုးလွင်နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း
Posted by drmyochit Thursday, January 30, 2014, under တွေ့ဆုံမေးမြန်း | No comments
မော်ဒယ်လ် တင်မိုးလွင် (ဓာတ်ပုံ – စိုင်းဇော်/ ဧရာဝတီ)
မော်ဒယ်လ် လောကမှာ အနှစ် ၂၀ ကျော်ကြာ အခိုင်အမာ နေရာတခုရရှိနေတဲ့၊ မော်ဒယ်လ်မိခင်ကြီး တင်မိုးလွင်က သူလေးစား အားကျရတဲ့ စာနယ်ဇင်းသမား လူငယ်များကို လုပ်ငန်းခွင်တွင်း နေထိုင် သွားလာ မှုမှာ ပိုမို စမတ်ကျလာစေဖို့ သင်တန်းပို့ချပေးမယ် ဆိုတဲ့သတင်း ထွက်ပေါ်လာပါတယ် ဒါကြောင့် သူ့စိတ် ကူး အစီအစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဧရာဝတီက တင်မိုးလွင်နဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး။ ။ မတင်မိုးလွင်အနေနဲ့ ဂျာနယ်လစ် မိန်းကလေးတွေကို ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘယ် လိုကြောင့် သင်တန်းပေးဖို့ ရည်ရွယ်ဖြစ်သွားတာလဲ။
ဖြေ။ ။ မမိုးက ဟိုးအရင်ကတည်းက စာပေစာနယ်ဇင်းက ညီမတွေ မောင်တွေကို အရမ်းချစ်တာပေါ့နော်။ ဘာကြောင့် လဲ ဆိုတော့ သတင်းလောကက သတင်းထောက် တယောက်၊ ဂျာနယ်လစ်တယောက် အဲဒီလိုပုံစံမျိုး မမိုးက ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ။ ကိုယ့်ရဲ့ အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်းမှုမှာလည်း မီဒီယာက အများကြီး အရေးပါတယ်။ ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီလည်း ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကောင်း သတင်း ကောင်းခြင်းတွေ အားလုံးကိုလည်း သူတို့က တကယ့်ကို စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ ပြည်သူလူထုတွေ သိအောင်၊ စာဖတ်သူတွေ သိအောင် ရေးပေးကြတယ်။ သူတို့က အလုပ်တာဝန်တွေည ကလည်း ကြီးလေး တယ်။ သူတို့ရဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အလုပ်ကလည်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လို့ ခေါ်တဲ့ ပညာရှင် အလုပ်တွေပေါ့။ ဒါကြောင့်မို့လို့ သူတို့ကို လေးစားတယ်။ ဒါပေမယ့် အများရဲ့ အမြင်မှာဆိုရင် ဂျာနယ်လစ် ဆိုတဲ့ နာမည်မျိုး၊ သတင်းထောက်ဆိုတဲ့ နာမည်မျိုးတွေမှာ အများကြီး လေးစားခံရခြင်းမျိုး တိုးတိုးပြီးတော့ ရှိမလာဘူး။ နှစ်တွေနှစ်တွေ ဘယ်လောက် ပြောင်းလဲတာတောင် သတင်းထောက်တွေကို လေးစားရမယ်၊ နေရာပေး ရမယ်၊ လေးတော့ လေးစားတယ်ပေါ့။ တခါတလေကျရင် ပွဲလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ ပွဲတက်လာတဲ့ သတင်းထောက်တွေကို သတင်းထောက်မှန်း မသိနိုင်ဘူး။
ဒါဟာ ဘာလဲလို့ မမိုးက အဖြေရှာကြည့်လိုက်တဲ့ အခါကျတော့ ဒီပညာရှင်တွေရဲ့ ပွဲတက်တဲ့ အနေ အထားလေးတွေ သွားလာ နေထိုင်တဲ့ အနေအထားလေးတွေပေါ့။ တချို့တွေက ကျတော့ ဒီပညာရှင် အဆင့်ကို ရောက်ရှိပြီးတော့ လုပ်ငန်းထဲမှာ နှစ်ကာလ ကြာရှည်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အထူးပြောစရာမလိုဘူး။ သူ့အထာနဲ့ သူ စနစ်တကျဝတ်စား ဆင်ယင်ပြီးတော့ ပွဲကို စနစ်တကျ တက်ရောက်ကြတယ်။ အဲဒါ ပညာရှင်တွေ တက်ရောက်တာ။ အသစ်ကလေးတွေ အနေနဲ့ကျတော့ ထပ်မံ လေ့လာဖို့၊ သင်ယူဖို့၊ ပြင်ဆင်ဖို့ အားနည်းပါတယ်။ တကယ်ကို အင်နဲ့အားနဲ့ လူရိုသေရှင်ရိုသေ လေးစားခံရတဲ့ အနေအထား မျိုး တကယ့်ကို တင့်တောင်းတင့်တယ် ရှိစေချင်တယ်။ တချို့တွေကလည်း မမိုးကိုပြောတယ်။ ဘယ်လိုလေး ၀တ်စား ဆင်ယင်ရင် ကောင်းမလဲပေါ့။ အဲဒါလေးတွေ မမိုးက အကြံဉာဏ် ပေးတတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုးအရင်တုန်းကလည်း မမိုးက မဂ္ဂဇင်း တစောင်မှာ ဘယ်လိုပညာရှင်မျိုးက ဘယ်လိုဝတ်စားဆင်ယင်မှု ရှိသင့်တယ်ဆိုတာ ခေါင်းစဉ်လေးတွေခွဲပြီး ရေးပေး ဖူးပါတယ်။ နည်းနည်းလည်းကြာသွားပြီဆိုတော့ နည်းနည်းလေး မေ့သွားတာဖြစ်မယ်။ လူတိုင်းလည်း ဖတ်မိချင်မှ ဖတ်မိမှာပေါ့။ ဒါကြောင်မို့လို့ အားလုံးအတွက် ရေးတာထက်ကို သတင်းထောက်တွေ အတွက်ပဲ သီးသန့်လိုတာမျိုး မမိုးက အကြံဉာဏ်ပေးချင်တယ်၊ သင်ပေးချင်တယ်၊ Share လုပ်ပေးချင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာ မမိုးက အဲဒီ ညီမလေးတွေ၊ မောင်လေးတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါမှာ စကားစမြည် ပြောဖြစ်တယ်။ သူတို့က ဒါဟာ ခေတ်ပညာရပ်တွေထဲက တခုဖြစ်တယ်။ အားလုံးသော မီဒီယာတွေကလည်း ဘာသာရပ် တခုအနေနဲ့ သင်ကြားလာတဲ့အခါမှာ လိုအပ်ရင် လေ့လာချင်ပါတယ် လို့လည်း သူတို့ကပြောပါတယ်။ မမိုးကလည်း အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ မမိုးရဲ့ သင်တန်းခန်းမမှာပဲ ဖြစ်စေ၊ သူတို့တွေ နေရာမှာပဲဖြစ်စေ သွားရောက်ပြီးတော့ သူတို့အနေနဲ့ သတင်းရင်းမြစ်တွေဆီ ဝင်ထွက်သွားလာတဲ့ အခါမှာ မီဒီယာ ပညာရှင်တယောက် အနေနဲ့ ဂုဏ်တင့်တယ်စေဖို့ မမိုးက အားဖြည့်သွားမယ့် သင်တန်းလေးတခုကို လုပ်ပေးချင်တာပါ။
မေး။ ။ အဲဒါက ဘယ်အချိန်လောက် အကောင်အထည် ဖော်ဖြစ်မှာပါလဲ။
ဖြေ။ ။ အဲဒါကတော့ မမိုးကတော့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သတင်းထောက်တွေ၊ မီဒီယာတွေ ကလေးတွေ ကလည်း မအားကြဘူးလေ။ ပွဲလမ်းသဘင် အခမ်းအနားတွေ ကလည်း များတယ်။ အချိန်နဲ့တပြေးညီ အမြဲတမ်း အလုပ်လုပ်နေရပြီး သတင်းတွေ လိုက်နေတာရယ်၊ ပြီးတော့ နေရာတွေကလည်း ဝေးတယ်၊ ကားတွေကလည်း ကျပ်တာရယ် ကြောင့်ပေါ့။ မမိုးကလည်း တွေ့ဆုံပြီးတော့ Share လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ အများကြီးတော့လည်း မလိုပါဘူး။ လိုအပ်နေတာ လေးတွေကို လုပ်ပေးချင်တာပါ။ နိုင်ငံတကာကို သွားတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံတကာရဲ့ သတင်းထောက် မျိုးစုံနဲ့လည်း များစွာ တွေ့ဆုံ ဖူးပါတယ်။ တချို့ကြတော့လည်း ခမ်းနားတဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်တွေမှာ သူတို့ရဲ့ စတိုင်လ်လေး တခုပေါ့။ အရမ်းကြီးလည်း တခြား ပွဲလာတဲ့ ဧည့်သည်လောက်လည်း လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ သတင်းထောက် ဆိုတာ သဘာဝကျကျလေးပဲပေါ့။ သူ့ရဲ့အလုပ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ပုံစံမျိုးလေးပေါ့။ အဲဒါမျိုးလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာဝတ်စုံ လေးတွေလည်း ရွေးသင့်ပါတယ်။ ခေတ် ၀တ်စုံ လေးတွေ ၀တ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်လို ၀တ်နိုင်တယ်ပေါ့။ နောက်တော့ ပွဲလမ်းသဘင် အခမ်းအနားတွေကလည်း သတင်းထောက် တွေရဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ ဒီအခမ်းအနား သဘင်ရဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေ၊ အဲဒါမျိုး လေးတွေလည်း Share လုပ်ပေးချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ မမိုးအနေနဲ့ မိန်းကလေးတွေပဲ ရွေးပြီးတော့ သင်မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကကော ဘယ်လိုကြောင့်လဲ။ ယောက်ျားလေးတွေ ကိုကော သင်ပေးမှာလား။
ဖြေ။ ။ မိန်းကလေးကတော့ ဦးစားပေးပေါ့။ မမိုးကလည်း မိန်းကလေး ဖြစ်နေတဲ့ အခါကျတော့လေ။ နောက်ပြီး မြန်မာပြည်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံခြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသားတွေကျတော့ စတိုင်လ်ဘောင်းဘီ တထည်နဲ့ ရှပ်အင်္ကျီ လက်ရှည် တထည်၊ ဒါမှမဟုတ် ကုတ်အင်္ကျီလေး တထည်ကို လက်ပေါ် တင်လာလိုက်ရင်ရတယ်။ နောက်တော့ ပွဲထဲဝင်မယ်ဆိုမှ ကောက်ဝတ် လိုက်ရင် ရတယ်လေ။ မြန်မာပြည်က အမျိုးသားတွေဟာ ဆိုရင် ကော်လာကတုံး အဖြူလေးနဲ့ ပုဆိုးလေးနဲ့ ဆိုရင် ညှပ်ဖိနပ်လေးနဲ့ ဆိုရင် အဆင်ပြေပြီ။ အမျိုးသားတွေ အတွက် အရောင်တွေ၊ ကာလာတွေလည်း အများကြီးမလိုဘူး။ စတိုင်လ်တွေလည်း အများကြီးမလိုဘူးပေါ့။ အမျိုးသမီးတွေ အတွက်ကျတော့ နည်းနည်းလေး ပိုပြီးတော့ အမယ်စုံတယ်။ ဒါကြောင့်မိုလို့ အမျိုးသမီးတွေကို အရင်ဦးစားပေးပြီးတော့ လုပ်ပေးမယ်လို့ မမိုးကပြောတာပါ။
မေး။ ။ အစ်မအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်တွေနဲ့ မြန်မာသတင်းထောက်တွေနဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုအသွင်အပြင် ဘယ်လို ကွာခြားတယ်လို့ မြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ကိုယ့်ဒေသ အတွင်းမှာတော့ ကိုယ့်စတိုင်က အကောင်းဆုံးပါ။ နိုင်ငံတကာကို သွားရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ အခါ ကျရင်တော့ သပ်ရပ်သန့်ရှင်းမှု၊ တိကျသေချာမှု၊ အဲဒီလို ပုံစံမျိုးနဲ့သွားရောက်ပြီးတော့ တစားပွဲတည်းထိုင်တာ၊ စင်မြင့်ပေါ် တက်တာ၊ တက်ရောက်ပြီးတော့ စကားပြောတာ၊ ဒါမှမဟုတ် အစည်းအဝေး တက်တာဆိုရင်တော့ နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်း ပွဲတွေကို တက်လို့ရှိရင် ဘယ်လိုလုပ်သွားရမယ်၊ ဘယ်လိုလေးတွေ ဆင်ယင်သွားရမယ် ဆိုတာမျိုး လေးတွေပေါ့။ တချိန်တော့ နိုင်ငံတကာက ၀င်ရောက်လာတဲ့ အခမ်းအနား ပွဲလမ်းသဘင်နဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်များကို သတင်း ထောက်လှမ်းရမယ့် သတင်းထောက်တွေ ဝင်လာနိုင်သလို၊ ဒီက သတင်းထောက်တွေ အနေနဲ့လည်း နိုင်ငံတကာကို သွားရောက် ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာက သတင်းထောက်တွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီးတော့ ပြောဆိုဆွေးနွေး လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် ရမယ့် ကိစ္စတွေလည်း ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ဖြစ်တဲ့ ပညာရှင်တွေကို၊ မီဒီယာလောကရဲ့ ပညာရှင်တွေကို အခုအချိန် ကတည်းကစပြီးတော့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီး လုပ်ထားစေချင်တဲ့ သဘောပါ။
မေး။ ။ သတင်းထောက်ဆိုရင်တော့ တချို့တွေက လေးစားကြတယ်။ တချို့တွေက ရှုတ်ချတတ်ကြတယ်။ အဲဒါလေးတွေကို မတင်မိုးလွင် အနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ လေးစားတယ်ဆိုတာက လေးစားလောက်တဲ့ လူတွေရှိပါတယ်။ သူရဲ့လေးစားလောက်သော ကလောင်၊ သူရဲ့လေးစားလောက်တဲ့ ဉာဏ်ရည်၊ သူရဲ့လေးစားလောက်တဲ့ နှလုံးရည်နဲ့စေတနာ၊ အမူအကျင့်တွေကြောင့် သိတတ်မှု တွေကြောင့်၊ လေးစားလောက်တဲ့ လူတွေရှိနေပါတယ်။ တခြားသော အနုပညာ လောကမှာလည်း သြဇာညောင်းပြီးတော့ ထင်ပေါ်ကြပါတယ်။ တချို့တွေကျတော့ လေးစားလောက်သော ကလောင်၊ လေးစားလောက်သော နှလုံးသားနဲ့ စေတနာ မရှိကြဘူးပေါ့။ သူတို့ရဲ့ ပြောဆိုပြုမူ နေထိုင်ပုံ၊ ၀တ်ပုံစားပုံ၊ သွားပုံလာပုံ အမူအကျင့်နဲ့ အပြုအမူပေါ့နော်။ အဲဒါလေးတွေ ကလည်း မှန်ကန်ဖို့ လိုတာလေးတွေ ရှိတာပေါ့။ အများကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အများစုကတော့ အရမ်းကိုတော်ပြီးတော့ အရမ်းကို မှန်ကန်ပြီးတော့ အဆင်ပြေကြပါတယ်။ နည်းနည်းလေး လိုအပ်တာ လေးကိုလည်းပဲ သူတို့ကိုယ်တိုင် ကလည်း လိုလားတာမို့လို့ မမိုးကနေပြီးတော့ ဖြည့်စွက်ပေးမယ်လို့ စိတ်ကူးလေးနဲ့ ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ အခုလို စီစဉ်တော့ သူတို့တွေအတွက် သင်တန်းကြေးတွေ သတ်မှတ်ထားတာမျိုး ရှိပါသလား။
ဖြေ။ ။ မရှိပါဘူး။ မမိုးရဲ့ မောင်တွေ ညီမတွေလိုပေါ့နော်။ အဲဒီလို စိတ်လေးနဲ့ မမိုးကသူတို့ကို မျှဝေပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မမိုးက ပညာရှင် အလုပ်အကိုင်တခုအဖြစ် ရပ်တည်ကြမယ့် မောင်လေး ညီမလေးတွေကို လူတွေ လေးစားအားကျပြီးတော့
လူအလေးထားတဲ့ ပညာရှင် တယောက်အသွင်အပြင် ပေါ်လွင်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒသက်သက်ပါပဲ။
မေး။ ။ နိုင်ငံတကာမှာ သွားပြိုင်နေတဲ့ မော်ဒယ်လ်တွေကိုရော မတင်မိုးလွင်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်လဲ။ မမိုးက ၀ါရင့် မော်ဒယ်လ် တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အခုပြိုင်ပွဲဝင် မော်ဒယ်လ်တွေရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေကို ဘယ်လိုမြင်လဲ၊ ဘာလိုအပ်ချက်တွေ ရှိတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ လောလောဆယ်တော့ မြန်မာဆိုတဲ့ နာမည်တလုံးနဲ့ကို အရမ်းကို အားသာနေပါတယ်။ တကယ့်တကယ်က လိုအပ်နေတဲ့ စိတ်ကလေးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေက မော်ဒယ်လ်တွေက ပြီးပြည့်စုံနေလား၊
ကျန်တဲ့နိုင်ငံက Miss တွေကလည်း အရမ်းကို Perfect ဖြစ်နေလား၊ ဒီလိုတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ မမိုးတို့နိုင်ငံက Miss တွေက အရမ်းကိုထူးချွန်တယ်၊ ကြိုးစားတယ်၊ အရမ်းလည်း သတ္တိရှိကြပါတယ်။ လိုအပ်နေတာ လေးကတော့ မမိုးတို့
နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ ပညာရှင်တွေက မော်ဒယ်လ်တယောက်ကို ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးဖို့ရယ်၊ ၀ိုင်းဝန်း လေ့ကျင့်ပျိုးထောင် ပေးဖို့ရယ်
လိုအပ်နေတာပါ။ သူတို့ရဲ့ နဂိုရှိပြီးသား စွမ်းရည်တွေ ကတော့ ရှိကြပါတယ်။ နိုင်ငံတော် အဆင့်၊ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် အဆင့် စီးပွားရေး လူမှုရေး ပညာရေးနယ်ပယ်၊ ဒါမျိုးတွေကနေ ၀ိုင်းဝန်း ကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် မှာတော့
မမိုးတို့ကလည်း တတ်နိုင်သလောက် ၀ိုင်းဝန်းကူညီပါတယ်။ ဒါကတော့ နိုင်ငံရဲ့လူရည်ချွန် လူရည်မွန်တွေ ပေါ်ထွက်လာရေးမှာလည်း အခန်းကဏ္ဍတခု အနေနဲ့ အရေးပါတာမို့လို့ နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားပြု စံပြမောင်မယ်တွေ ပေါ်ထွက်လာတာ အရမ်း ကောင်းပါတယ်။ နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အားကစားသမား တွေလိုပဲပေါ့။ နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ စံပြမောင်မယ် တွေကလည်း တိုင်းပြည်ရဲ့ ရတနာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အဲဒီလို လူတွေအများကြီး ပေါ်လာတာ ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီလို လူတွေကို နိုင်ငံခြားက ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ သူတို့နိုင်ငံရဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ စင်မြင့်တွေပေါ်တက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ခံရတာဟာလည်း ဂုဏ်ယူ ၀မ်းမြောက်ဖွယ် ဖြစ်ပါတယ်။ အများကြီးလည်း ဒီထက်ပို ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးမှာ ကျင်းပနေတဲ့ စံနမူနာပွဲပေါင်း များစွာရှိပါတယ်။ အဲဒီပွဲပေါင်း များစွာကို မမိုးတို့ မြန်မာပြည်က မောင်မယ်တွေ တက်ရောက် ပြီးတော့ ဂုဏ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။
မေး။ ။ လက်ရှိ မော်ဒယ်လ်လောကကော ဘယ်လို အနေအထားနဲ့ ရှိနေပါသလဲ
ဖြေ။ ။ မမိုးတို့ဘက်ကတော့ တိုးတက်ပြောင်းလဲ နေပါတယ်။ အကောင်းဘက်ကိုလည်း အများကြီး သွားပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ အဆိုးဘက် ကိုလည်း အများကြီး သွားပါတယ်။ အကောင်းဘက်ကို ပိုပြီးသွားဖို့အတွက် အများကြီး ၀ိုင်းဝန်းပြီးတော့လည်း ကြိုးစားနေကြ ပါတယ်။ အဆိုးဘက်ကို အများကြီး မသွားဖို့လည်း မမိုးတို့အနေနဲ့ ဆုတောင်း နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခေတ်နဲ့စနစ်အရ အယူအဆ လွဲတာလေးတွေရှိမယ်။ အပေါင်းအသင်း မှားတာလေးတွေ ရှိမယ်။ ဒါတွေကတော့ မမိုးတို့လည်း ကြည့်ပြီးတော့ ရင်နာရတာပေါ့။ တတ်နိုင်သလောက် ကတော့ အကောင်းများလာဖို့ ကောင်းမွန် မှန်ကန်ဖို့ လမ်းကြောင်းကို ဖြစ်လာဖို့ အတွက်ကတော့ ၀ိုင်းဝန်းပြီးတော့ အားထုတ်နေကြပါတယ်။ အခုလိုမျိုး Mr. တွေ Ms. တွေ၊ မောင်တွေမယ်တွေ ပေါ်လာတာဟာ အများကြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အလင်းအားကို ပေးပါတယ်။ မော်ဒယ်လ်လောကက မကောင်းတဲ့ အမူအကျင့်တွေနဲ့ လောင်းရိပ်အောက်မှာရှိတဲ့ ဟာမျိုးလည်း ရှိနိုင်သလို အမြင်မကြည်လင်နိုင်တဲ့ အချိန်အခါ မျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလိုမျိုးပေ့ါနော်၊ နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့ လူတွေ ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ လိုင်း၊ ကဏ္ဍတွေက အများကြီး ကွဲထွက်သွားပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ အနေနဲ့လည်း ထင်ထင်လင်းလင်း သိမြင်သွားတယ်။ ဘယ်လို ကိစ္စမျိုးတွေကတော့ အားပေးချီးမြှောက်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ပြီးတော့ ဘယ်လိုကိစ္စတွေကတော့ အားပေးချီးမြှောက်ဖွယ်ရာ မဟုတ်ဘူးလဲ ဆိုတာ သိသွားတာပေါ့။ အရင်တုန်းက ဆိုရင်တော့ သိပ်တော့ မကွဲပြားဘူးပေါ့လေ။ အခုဆိုရင်တော့ ပိုပြီးတော့ စာပေစာနယ်ဇင်းမှာ ဆိုရင်လည်း ချီးမြှောက်အားပေး ရေးသားမှုတွေလည်း ရှိလာပြီ။ ဒါဟာ တခြားကိစ္စတွေကို တောင်မှ ချီးမြှောက် အားပေး ရေးသားနေတာတွေ ရှိသလို ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေ ဆိုရင် ပိုလုပ်ပေးရမှာပေါ့ဆိုတဲ့ အတွေးအမြင် အသိအမြင်တွေ ရှိလာတာပေါ့။
Facebook မှာဆုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ သားအရွယ်ယောင်္ကျားလေးနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့သူ အမျိုးသမီး အချစ်ကြောင့် နွားချေးကျုံးတဲ့ဘ၀ရောက်သော်လည်း သက်ဆုံးတိုင်ချစ်သွားမည်ဟုဆို
Posted by drmyochit Thursday, January 30, 2014, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
အမေရိကန် နိုင်ငံ ကအမျိုး သမီး တစ်ဦး ဟာ အချစ်စစ် ကိုယုံကြည် ခဲ့လို့ အရာ အားလုံး ကို စွန့်လွှတ် ခဲ့ တယ် လို့ ဒေးလီးမေးလ် သတင်း တစ်ရပ်မှာ ရေးသား ထားပါ တယ်။ ကယ်လီ ဖိုးနီးယား ပြည်နယ်မှာ နေ ထိုင် တဲ့ အသက် (၄၁) နှစ် အရွယ်ရှိ အက် ဒရီယာ နာ ဟာ အသက်ကြီး မှ အချစ် စစ်၊ အချစ်မှန် ကိုရှာဖွေ တွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ချစ်သူအသက် (၂၅) နှစ်သာရှိသေးတဲ့ အိနိ်္ဒယနိုင်ငံသား ကူးမားကို လက်ထပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ် ခဲ့ပါတယ်။
အက်ဒရီယာနာဟာကူးမားကိုFacebookကနေ တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးချစ်သူတွေအဖြစ်ရောက်ရှိသွား ခဲ့ ပါတယ်။
အက်ဒရီယာနာဟာကလေးအမေတစ်ဦးဖြစ်ပြီးသူ့မှာအသက် (၂၄) နှစ်အရွယ်သမီးတစ်ဦးလည်းရှိပါတယ်။ဆိုရရင် အက်ဒရီယာနာဟာ သူ့သားသမီးအရွယ်လောက်ကိုလက်ထပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အက်ဒရီယာနာဟာကူးမားကိုအရမ်းချစ်ခဲ့တာမို့အိနိ်္ဒယနိုင်ငံကို ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ် ခဲ့ပါတယ်။
ကူးမားနေထိုင်တဲ့နေရာဟာရွာလေးတစ်ရွာသာဖြစ်ပြီးမြို့ကိုရောက်ဖို့အနည်းဆုံးမိနစ် (၃၀) လောက် ကားမောင်း သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အိနိ်္ဒယနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘ၀ဟာလုံခြုံမှုမရှိလို့အက်ဒရီ ယာနာကို ကူးမားဆီမသွား ရောက်ဖို့မိဘဆွေမျိုးတွေက ဟန့်တားခဲ့ပေမယ့် အောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။
အက်ဒရီယာနာဟာအမေရိကန်မှာနေထိုင်စဉ်က ခေတ်ဆန်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ် ခဲ့ပေမယ့်အိနိ်္ဒယကို ရောက်တဲ့အခါအရာရာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ ကူးမားရဲ့မိသားစုနဲ့အတူ နေထိုင်ရတာမို့ အိမ်အလုပ်တွေ ကိုလည်း ၀ိုင်း ကူလုပ် ပေးရပါတယ်။
ကူးမားဟာလယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်သူဖြစ်ပြီးအက်ဒရီယာနာအနေနဲ့နွား ချေးတွေတောင်ကြုံး ရတဲ့အထိ လုပ်ကိုင်ခဲ့ ရပါတယ်။
နောက်ပြီးကူးမားဟာဟိန္ဒူဘာသာကိုကိုးကွယ်သူဖြစ်တာမို့အက်ဒရီယာနာ အနေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဆင်ပြေဖို့ အိနိ်္ဒ ယရိုးရာအ၀တ်အစားတွေကိုလည်း ၀တ်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။အက်ဒရီယာနာဟာ မတူညီတဲ့ ဘ၀ကို ရောက်သွားပေမယ့် သူ့အနေနဲ့ အမေရိကန် ကိုဘယ်တော့မှ ပြန်တော့မှာမဟုတ်ဘဲကူးမားနဲ့ တည်ထောင် ထားတဲ့ အိမ်ထောင် ရေးကိုသက်ဆုံးတိုင်တည်တံ့ဖို့ကြိုးစားသွား မှာဖြစ်ပြီးကလေး ရဖို့လည်း စီစဉ်နေ တယ် လို့ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။အချစ်ဟာ အရာရာကို ပြောင်းလဲစေတယ်ဆို တာဒီဖြစ်ရပ်က သက်သေပြ သွား ခဲ့ပါတယ်။
ရုံးတွေ အဖွဲ့ စည်းတွေမှာ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Networking ချိတ်ဆက်နည်း
Posted by drmyochit Thursday, January 30, 2014, under စာအုပ်စင် | No comments
ဒီစာအုပ်လေးကတော့ ရုံးတွေမှာ ကွန်ပျုတာ တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးဖို့ 
အသေးစိတ်ရေးထားတဲ့ ချိတ်ဆက်နည်း သဘောတရားတွေပါ ။ ရုံးတွေမှာလုပ်ရင်
ဒါတွေကို အကုန်နားမလည်ရင်နေ အခြေခံတော့ သိထားမှဖြစ်မယ် ။ ဘာလို့ လဲဆို
Network Share စနစ်ကို ရုံးတိုင်းမှာ အသုံးပြုနေသောကြောင့် ဖြစ်တယ် ။ ကျနော့်ရုံး
ဒီစနစ်သုံးတယ် ။ Computer4လုံး Printer တစ်လုံးထဲ က မျှဝေသုံးစွဲတဲ့စနစ်မျိုးပေါ့
အဲ့မှာ အနည်းငယ် နားလည်ထားသင့်တာက Manager ရဲ့ ကွန်ပျုတာကို ချိတ်တယ်
ကျန်သုံးလုံးက Share စနစ်နဲ့ သုံးတယ် ။ ဒါဆို Net work သဘောတရားအရကြည့်
မန်နေဂျာစက်က Main Sever ဖြစ်ပီး ကျနော်တို့ စက်တွေက Client ကွန်ပျုတာပါ
မိန်းကွန်ပျုတာ ပိတ်တာနဲ့ကျနော်တို့Printer ကို သုံးလို့ မရတော့ဘူး ပြဿနာ
ဖြစ်ဖူးတယ် ။ ညနေ၅နာရီ မန်နေဂျာပြန်တယ် ကျန်တဲ့သူ အချိန်ပိုဆင်းတယ်ဆို
မန်နေဂျာက သူ့ ကွန်ပျုတာ ပိတ်ခဲ့တယ် ။ အဲ့ဆို ကျန်တဲ့ကွန်ပျုတာတွေက သုံးမရ
တော့ဘူး ။ အခြေခံ ပညာကို ကြုံခဲ့သလောက် ပြောပြတာပါ ။စာရင်းတွေဆိုရင်လဲ
ကျနော်တို့ ရုံးတွေ တခြားသူတွေလည်း အားလုံး အတူတူပဲ Share စနစ်ထားတယ်
တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဌာနတွေအကုန် ချိတ်ဆက်ရတာပါ ။ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ စာရင်းကို
တခြားဌာနက ယူကြည့်လို့ ရတယ် ဒါဟာ ရုံးတိုင်း အဖွဲ့ တိုင်း ဒီစနစ်ကိုကို သုံးတယ်
ဘယ်လို Network ပဲဆိုဆို စောစောက ပြောသလို အဓိကအားဖြင့် 2မျိုးပဲရှိတယ်
ပထမတစ်မျိုး မိမိကွန်ပျုတာထဲမှာ ရှိတဲ့ ဖိုင်တွေ စာရင်းတွေကို ပေးသုံးစေမယ့်
Sever ကွန်ပျုတာ ၊ နောက်တစ်မျိုးက စာရင်းတွေ နဲ့ ဖိုင်တွေကို Share ယူသုံးမယ့်
Client Computer ပါ ။ နမူနာဆို တစ်ခုပြောရရင် ကျနော့ရုံးခန်းက ဖိုင်တွေကိုပေါ့
တခြား အလုပ်ခြင်းဆက်စပ်တဲ့ ဌာနတွေကို Share ခွဲသုံးတယ် ။ ကျနော့ဆီကနေ
စာရင်းတွေ အချက်လက်တွေ ယူယူကြည့်ရတယ် ။ ဒါဆို ဒီကွန်ပျုတာက Main
သူတို့ ကို Share ရင် Data Read Only ပဲ ပေးထားပြီး စာရင်းတွေကို Sever ကပဲ
ပြင်လို့ ရမယ် သွင်းလို့ ရမယ် မနက်ကျနော် နောက်ကျတယ် Main က မဖွင့်သေးရင်
တခြား စက်တွေ ဘာမှလုပ်မရဘူး ။ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်စနစ်မှာလည်း ဒီလိုပဲ
သဘောတရား တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အတူတူပါပဲ ။၀ါသနာပါသည်ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ
တချို့ ပညာတွေက အစမ်းသဘောလေးနားလည်ထားသင့်တယ်။ ကျနော်တို့ ရုံးဆို
ရာထူးကြီးတာ လခကောင်းတာ အများကြီး သို့ သော် မလေ့လာတဲ့သူက သိကိုမသိ
ကွန်ပျုတာ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် လုံးဝမသိတော့ဘူး Network ပိုင်းဆိုပိုဆိုးပါသေးတယ်
အထူးဆန်းဆုံးပြောရရင် မြန်မာစာပျောက်တာတောင် မလုပ်တတ်ကြသေးဘူး
ဆိုလိုချင်တာကတော့ ပညာဟာသေးသည်ဖြစ်စေ ကြီးသည်ဖြစ်စေ တတ်သင့်တာ
သိသင့်တာဆို ၀ါသနာမပါသော်လည်း လေ့လာရမှာ သင်ယူရမှာ လို့ ပြောချင်တာ
ပညာခေတ်မှာ ဘယ်နေရာမှာလုပ်လုပ် ပညာတတ်သူက တစ်ပန်းသာလိမ့်မယ်
အဲ့တော့ ရုံးမှာ လုပ်သူတွေ လုပ်မယ့်သူတွေ ဒီစာအုပ်ကိုလေ့လာကြည့် အကုန်မသိ
ရသေးတယ် သဘောတရား ပေါက်သွားရင် အဆင်ပြေပီ။ကိုယ်တိုင်မပြင်တတ်လဲ
ဘယ်က ဖြစ်တယ် ဘာပြဿနာလောက်တော့ သိလာပါလိမ့်မယ် ဖတ်ကြည့်လိုက်
ဒီလင့်မှာယူပါ >>> Begineer Guide To Network
အင်တာနက် ဆိုင်ရာ Network ကို ပိုင်နိုင်စွာ သေချာ ရှင်းလင်းထားတဲ့ စာအုပ်
ဒီစာအုပ်လေးကတော့ အင်တာနက်ပိုင်းဆိုင်ရာ Network ရဲ့သဘောတရားကို
သေချာရှင်းလင်းပေးထားပြီး အခြေခံဘယ်လောက်ကျသလဲဆိုIP Adress တွေရဲ့
ဖွဲ့ စည်းတည်ဆောက်ပုံ Decimal <==> Binary အပြန်အလှန် ပြောင်းတွက်ပုံ
စနစ်တကျ ရေးပြထားတာမို့ကွန်ပျုတာ ကျောင်းသားတွေ နည်းပညာရှင်တွေနဲ့ 
Network သီးသန့် လေ့လာနေသူတွေအတွက် မှီငြမ်းလေ့လာစရာ စာအုပ်ပါ
အင်တာနက် သုံးနေသူတွေအတွက် IP adress ဟာ အလွန် အရေးပါနေတယ်
၀က်ဆိုဒ်တစ်ခု အတိုက်ခံရတာ ၊ အကောင့်တစ်ခု အဖောက်ခံရတဲ့နေရာမှာ
IP လိပ်စာသိမှ ဘယ်နိုင်ငံက လုပ်တဲ့ ဘယ်သူက လုပ်တယ်ဆိုတာ တစ်ဆင့်ချင်း
ခြေရာခံလို့ ရတာပါ ။ ကိုယ်က တစ်ခုခု တိုက်ပီ ဖောက်ခဲ့ပီဆို IP ဟာခြေရာခံဖို့ 
နေရာစုံစမ်းဖို့ တစ်ဆင့်ချင်း လုပ်ယူရမှာ ကျနော့် IP သိတာနဲ့ ကျနော်သုံးနေတဲ့
ISP ( Internet Service Provider ) ကိုသွားမေးရင် Register လုပ်ပီးသုံးတာမို့ 
ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လိပ်စာ ဖုန်းနံပတ် အကုန်သိသွားပီး နောက်ဆုံး အိမ်အထိ
ရောက်လာမှာ ။ အခု ခေတ်စားနေတဲ့ ဟက်ကာတွေ တိုက်ခိုက်တာတွေ အလွန်
ချီးကျူးဖို့ ကောင်းပါတယ်။ နာမည်ကြီးနေတာဟာ အလကား မဟုတ်ပါခဲ့ပါဘူး
အစိုးရဆိုဒ်ပေါင်းများစွာကို တိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ BHG ဆိုရင် ၂၀၁၀ မှာ ကမ္ဘာကျော်ပါ
မြန်မာပညာရှင်တွေ အဲ့သြော အားကျဖို့ ကောင်းပါတယ် Network ဆိုတာကြီးက
လေ့လာမယ်ဆို အလွန်ကျယ်ပြန့် ပါတယ် ရှုပ်ထွေးပါတယ် ။ကိုယ်တိုင်လည်းသိဖို့ 
လေ့လာဆဲသင်ယူဆဲပဲရှိသေးတာမို့အများကြီး ရှင်းမပြနိုင်ပါဘူး အလုပ်ဝင်ပီးလို့ 
တစ်လအကြာ သူဌေးက မန်နေဂျာကို မေးတယ် လူသစ်က ဘယ်လိုလဲဆိုတော့
မန်နေဂျာက ပြန်ဖြေတယ် Computer,Networking, Excel,Work All အိုကေ
သူဖြေတာ ကိုယ်ကြားရတော့ ဘ၀င်တောင်မြင့်ချင်တယ် တကယ်တော့ အားလုံး
အခြေခံပဲ လေ့လာထားတာပါ Network ရတယ်ဆိုတာလည်း ဌာနတစ်ခုခုကနေ
အင်တာနက်လိုင်း မရတာ ၊ Printer ,Server,Proxy တွေ အကြောင်း အနဲလေး
လေ့လာထား သိထားရုံနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ် ။ ပညာရှင်ဆင့်လည်း မလေ့လာနိုင်
အချိန်မပေနိုင်ပါဘူး ။ ၂၁ရာစုမှာ လူတွေ သင်တန်းတက်ပီး အေးဆေး ပညာရေး
သုသေသနလုပ် လေ့လာဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး ။အလုပ်လုပ်ရင်း ကျောင်းတက်
စာဖတ်ပြီး လက်တွေ့ လေ့လာနေကြရတာပါ။ Self-study မလုပ်နိုင်ပဲနဲ့ တော့
အခုကာလ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အခြေနေနဲ့မလွယ်လှပါဘူး ။ပိုက်ဆံအရမ်း
ချမ်းသာပြီး နောက်ခံကောင်းရင်တော့ ကိုယ်ရခဲ့တဲ့ဘာသာ ကိုယ်သင်ခဲ့ရတဲ့ပညာ
တွေအတွက် အေးဆေး သုသေသနပြု အချိန်ပေးဖို့သင်တန်းတက်ဖို့ ဆိုတာက
တကယ်မလွယ်ပါဘူး အားလုံး ၀မ်းစာအတွက် အလုပ်လုပ်ရပြီဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်
လေ့လာသင်ယူခြင်း ( Self-Study ) ဆိုတာ ကျနော်နဲ့ ဘ၀တူ သူငယ်ချင်းတွေ
အလေးထားရမယ့် စနစ်ပါ။ ဒါကြောင့် ကျနော်သုံးတော့ ဆော့ဝဲ ကောင်းတယ်ဆို
ပြန်ပြောပြတယ် ကျနော်ဖတ်တဲ့စာအုပ် အဆင်ပြေတယ်ဆို ပြန်ဖတ်စေတယ်နော
အသိပညာကို Share လုပ်တာ မျှဝေတာပါ တတ်လွန်းလို့ ဆရာ လုပ်နေတာတော့
မဟုတ်ရေးချ မဟုတ်ရပါ ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့လမ်းညွှန်ရရင် ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာ
လူပြောများ အသုံးများ သိထားသင့်တဲ့ Proxy ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အခြေခံကစပီး
သေချာ ရှင်းပြပေးထားသေးတယ်။ proxy ဆိုတာ မြန်မာပြည်ကလူတွေ ပိုပြီးသိ
ပိုပြီးနားလည်ပါတယ် ၀က်ဆိုဒ်တွေ ကြည့်မရအောင်ပိတ်ရင် တခြား Proxy ကိုသုံး
ကျော်ကြည့် ခွကြည့်ရပါတယ် ။အဲ့တော့ပိုနားလည်ထားသင်တာက အပိတ်ခံရတဲ့
မြန်မာပြည်ကလူတွေလိုလည်း ဆိုချင်ပါတယ် ။ မြန်မာပြည်က လူမဟုတ်ခဲ့ရင်လဲ
proxy Server ဟာ Main Computer တစ်ခုကနေ ဌာနအသီးသီးမှာရှိနေလေတဲ့
ကွန်ပျုတာတွေကို ခွဲဝေချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာ ယနေကာလ လူသုံးအများဆုံးနဲ့ 
အဆင်ပြေဆုံး Internet Sharing System တစ်ခုပါဒီစနစ်ရဲ့ အားသာချက်တွေမှာ
Serverကနေ ကွန်ပျုတာတွေအားလုံး ထိန်းချုပ်တာဖြစ်ပြီး မကြည့်စေချင်တဲ့ဆိုဒ်
တွေကိုလည်း ပိတ်လို့ ရတယ်။ မြန်မာပြည်မှာအဖြစ်များတဲ့ Access Denied ဆိုဒ်
လူအတော်များမျာ သိမှာပါ မြန်မာပြည်ရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံးနဲ့ လူသုံးအများဆုံးဆိုဒ်
တစ်ခုခု ဖွင့်လိုက်တိုင်း Access Denied ဆိုတာက အရင်လာနေတော့ သုံးရတာ
စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းလှတယ် ကိုယ်တိုင်လည်း ကြုံတာမို့ ဟာသအဖြစ်ပြောတာ
လက်ရှိလည်း ဒီစနစ်ကို နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်တွေမှာ သုံးနေတယ် ကျနော်တို့ ရုံးလဲ
ဒီစနစ်သုံးပါတယ် ကောင်တာက ဌာနအသီးသီးက Computer တွေ ဘယ်အချိန်
အထိ လိုင်းချပေးမလဲဘယ်အချိန် လိုင်းဖြတ်မလဲဆိုတာကအစ ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်
ရုံးမှာ အရင်ဆို ည ကိုးနာ၇ီခွဲအထိပဲ သုံးခွင့်ရတာ။ အဲ့နောက်ပိုင်းဆိုရင် လိုင်းက
ဖြတ်ထားတယ် ။အခုတော့ အဲ့စနစ်ပြန်မလုပ်သေးဘူး အင်တာနက်ဆိုင်တွေကလို
Local Network ထဲက Computerမှာ ဘယ်ဝက်ဆိုဒ်တွေ ဖွင့်ခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်း
Porxy server log file မှာ ပြန်ကြည့်လို့ ရပါတယ် အဲ့တော့ ကျနော်ဘာဆိုဒ်တွေ
သုံးတယ် ဖွင့်နေတယ်ဆိုတာ ပြန်ကြည့်ရင်သိတယ် ။တခြားသူတွေလည်း ဒီလိုပါပဲ
ဌာနဆိုင်ရာ အသီးသီးကနေ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေ ကိုယ်ဖွင့်တာ ပိတ်ရုံနဲ
ပျောက်သွားပီ မသိနိုင်ဘူးဆိုတာ မဟုတ်ဘူး Proxy Server Log File မှာ အကုန်
ပြန်ရှာလို့ ရပါတယ်။ နောက်ထပ်ကောင်းတာတွေကတော့ Local Area Network
ထဲက ကွန်ပျုတာမှာ အင်တာနက်ကို Username နဲ့ပတ်စ၀ပ်သိမှ အသုံးပြုဖို့ 
ထိန်းချုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်း ရတယ် တခြားနည်းတွေထက် သာတဲ့နေရာမှာလည်း
ဒီစနစ်က ဌာနတစ်ခုက ၀က်ဆိုဒ်တစ်ခုကို သုံးတယ်ဆိုလည်း Server Cacheထဲ
မှတ်ထားပေးတာမို့တခြားဌာနတစ်ခုခုကလည်း ဒီဆိုဒ် ဖွင့်တာဆိုရင်အမြန်ပြန်ချ
ပြန်ပွင့်စေတာမို့ Network Traffic မဖြစ်ပဲ အင်တာနက်မနှေးတော့ဘူးဒီစနစ်တွေ
ဒီပညာတွေဟာ ရုံးတွေမှာ နေတဲ့သူ လုပ်တဲ့သူတွေ သက်ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင်သိဖို့ 
လေ့လာဖို့ လိုပါတယ် သိထားမှ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်ကို သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်
နည်းပညာခေတ် သတင်းခတ်မို့တစ်ခုပိုသိရင် တစ်ခုပိုတတ်ရင် အလုပ်ထဲမှာရော
တခြားနေရာတွေမှပါ သူများထက် ခေါင်းတစ်လုံး ပိုမြင့်လိမ့်မယ် ဒါကြောင့် ပညာရပ်
နည်းပညာတစ်ခုခုကို သေချာ လေ့လာနိုင်ပါစေ သိပါစေ ရည်ရွယ်ပြီး ပြန်မျှနေတာ
ဟာသ ပညာရှင်ကြီးတစ်ဦးပျက်လိုက်တာ သိပါလိမ့်မယ် သူ့ ကိုထောင်ချအမိန်ချတဲ့
တရားသူကြီးမင်းက ကွန်ပျုတာမရှိ နည်းပညာမသိသလို ဖမ်းတဲ့ အမှုလည်း အီးမေး
ဂျီမေး ကွဲပြားစွာမသိတဲ့ ၀န်ထမ်းက Electric Act နဲ့ထောင် ၂၄ နှစ် ချလိုက်သတဲ့
နောင်ကာလ မြန်မာနိုင်ငံရေးစနစ်မှာ ပညာတတ်တွေ နည်းပညာရှင် တကယ်သိ
တကယ်တတ်တဲ့ လူတွေ ပါဝင်စေဖို့ဆုတောင်းရမှာဖြစ်သလို တတ်သိသလောက်
ပြုလုပ်ကြဖို့ လည်း လိုပါတယ် ပြောရရင် နိုင်ငံရေးဖက်ရောက်တော့မယ် မီးမလာတဲ့
ဓာတ်တိုင်အောက် ရပ်မိလို့ မှောင်ရိပ်ခိုမှုနဲ့အဖမ်းခံရမှာလည်း စိုးရိမ်ရပါသေးတယ်
အဆုံးပြောရရင် ဒီစာအုပ်ဟာ Network အတွက်အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ စာအုပ်ဆိုတာ
သိစေအပ်ပါတယ် အခြေခံပညာသင်ကနေပညာရှင်အဆင့်တွေထိ ပါဝင်ကြောင်း.။
ဒီလင့်မှာ ယူလိုက်ပါ - အဆင်မြင့်ပိုင်း Network ဆိုင်ရာစာအုပ်
အင်တာနက်စတင်အသုံးပြုသော အခြေခံသမားတွေအတွက် နည်းလမ်း
ဒီစာအုပ်လေးက အင်တာနက်အသုံးပြုနည်း သဘောတရားတွေကို အသေးစိတ်
စနစ်တကျရေးသားထားတာမို့ စတင်လေ့လာနေသူတွေ သင်တန်းမတက်ဖြစ်သူ
ဒီစာအုပ်လေးကို သေချာဖတ်မှတ်လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ ဘလော့စတင်ပြုလုပ်သူ
တည်ဆောက်နေသူအတွက်လည်း ပါပါတယ် စာအုပ် မာတိကာအတိုင်း သိလိုရာ
ရွေးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ ဗဟုသုတရနိုင်တဲ့အတွက် မျှဝေလိုက်ပါတယ်.................။
ဒီလင့်မှာ Download ယူပါ - အခြေခံInternet Guide
Posted by drmyochit Thursday, January 30, 2014, under ဟာသ | No comments
ဟိုင်းဝေး လမ်းမကြီးမှာ ကားမောင်းလာရင်း မူးမေ့လဲခါနီး အမျိုး သမီးတစ်ယောက် အကူအညီတောင်းလို့ ဆေးရုံ လိုက်ပို့ လိုက်တယ်။
ဆေးရုံမှာ ခဏကြာစောင့်တော့ ဆရာဝန်က လာပြောတယ်။ ဝမ်းသာ စရာပဲ ဗျာ။ ခင်ဗျား အမျိုးသမီးမှာ ကိုယ်ဝန် ရှိနေပြီ ဗျ။
"ဟာ ဘယ်ကလာ။ အဲဒါကျွန်တော့မိန်းမ မဟုတ်ဘူးဗျ။"
ယင်း အမျိုးသမီးအား ဆရာဝန်က မေးမြန်းသောအခါ " ဟင့် အင်း သူက ကျွန်မ ယောင်္ကျားပါ"
အဲဒီ မှာ ကျွန်တော် ဇောချွေးတွေ ပြန်နေပါတော့မယ်။ မဟုတ်ပါ ဘူးလို့ ငြင်းရက်သား ဒီကောင်မလေးက ဘာစိတ်ကူးပေါက်လို့ သူ့ယောက်ျားလို့ဆိုမှန်းမသိ။
ဒီတော့ တာဝန်မဲ့ချင်ရလားဆိုပြီး ဆရာဝန်များက ကျွန်တော့ကို DNA စစ်ဆေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သဘောတူလိုက်ပြီး DNA စစ်ဆေးလိုက်ရာ အဖြေထွက်လာပါတော့တယ်။
"ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျားက သူ့ယောင်္ကျားမဟုတ်ပါဘူး။ မိတ်ဆွေက မွေးကတည်းက မြုံနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ ကလေးမရနိုင်ပါဘူး။ ဆောရီးဗျာ။ လူကြီးမင်း ပြန်နိုင်ပါပြီ။"
အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း အိမ်ကိုအပြန် ဟိုင်းဝေးလမ်းမကြီးမှာ တစ်ယောက်တည်း ဇောချွေးတွေ ပြန်နေပါတယ်။
ဒါဆို ကျွန်တော့မိန်းမ မွေးတဲ့ သားနဲ့သမီးက ဘယ်လိုရလာတာလဲဆိုတာလေ..
Translated from "Stress of Level"
နေ့စဉ် အထိုင်များသူများ ဆင်ခြင် ကာကွယ်စရာ လိပ်ခေါင်းရောဂါ
Posted by drmyochit Thursday, January 30, 2014, under ကျန်းမာရေး | 1 comment
သင် တစ်နေ့ကို ဘယ်နှနာရီလောက် အထိ အထိုင်များပါသလဲ။ အထိုင်များပြီး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု အလွန်နည်းပါး သူတွေဟာ သွေးတိုး၊ ဆီးချို စတဲ့ ရောဂါတွေအပြင် သိပ်မကြာခင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ရောဂါတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လိပ်ခေါင်း ရောဂါပါပဲ။ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်း မေးကြတဲ့ ဟာသတစ်ခု ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကြည့်လို့လည်း မရဘူး။ ကြည့်လည်း မကြည့်ချင်ဘူး။ သူများလည်း မပြချင်ဘူး။ အဲဒါ ဘာလဲတဲ့။ ကျန်တစ်ယောက်က မဖြေနိုင်တော့ သူက ပြောပြတယ်။ အဖြေကတော့ လိပ်ခေါင်းပါတဲ့။
တကယ်တမ်းကတော့ လိပ်ခေါင်း ရောဂါဟာ ဒီဟာသထဲမှာ နောက်ထားတာထက် အဆပေါင်းများစွာ ဆိုးပါတယ်။ ဝမ်းသွားခြင်း၊ ထိုင်ခြင်းတွေမှာ နာကျင်မှု ဒုက္ခ ခံစားရသလို နေ့စဉ် သွေးထွက် ဆုံးရှုံးမှုကလည်း ရှိလို့ ကြာလာရင် သွေးအားနည်း ရောဂါပါ ရလာ စေပါတယ်။ အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက်နဲ့ စိတ်မကြည်တော့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး အကုန် ထိခိုက်တာပါပဲ။ ကုသမှု ခံယူဖို့ ကျတော့လည်း ဟာသထဲက ပြောသလိုပဲ၊ ရှက်ကိုးရှက်ကန်း ဖြစ်ကာ တော်တော်နဲ့ မပြဖြစ်ကြပါဘူး။ အမျိုးသမီးတွေဆို ပိုဆိုးတာပေါ့။ ဒါကြောင့် အသက်အန္တရာယ်နဲ့ ဝေးသော်လည်း အမြစ်မတွယ်သင့်ဘဲ တွယ်သွားတတ်တဲ့ ဝေဒနာဆိုးတဲ့ ရောဂါ တစ်ခုဖြစ်လို့ သိရှိကာကွယ်စရာ
လိပ်ခေါင်း ရောဂါဆိုတာ ဘာလဲ
လိပ်ခေါင်းရောဂါ (Hemorrhoid/Pile) ဆိုတာ အူမကြီး အဆုံးပိုင်း အစာဟောင်းအိမ်နဲ့ စအိုမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဖောင်းပွနေတဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေရဲ့ အစုအဝေး ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးပြန်ကြောတွေရဲ့ အတွင်းမှာ ဖိအားများလာလို့ အဲဒီလို ဖောင်းလာရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိအားများလာစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေက ဝမ်းချုပ်သော အကျင့်ရှိခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကြီးထွားလာသော သားအိမ်ကြောင့် ဖြစ်ခြင်း၊ အထိုင်များခြင်း စသဖြင့် အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ စအို အတွင်းပိုင်းမှာ ရှိပြီး လက်နဲ့ စမ်းလို့မရတဲ့ လိပ်ခေါင်းကို အတွင်းလိပ် (Internal hemorrhoids) လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ နာကျင်တဲ့ ဝေဒနာ များသောအားဖြင့် မရှိလို့ ပုံမှန်နေရင်း မသိနိုင်ဘဲ ဝမ်းသွားတာ သွေးပါမှ သိနိုင်တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ မကုသဘဲနေရင် အရမ်းဆိုးလာပြီး ကျွံထွက် လာတတ်ပါတယ်။ အပြင်လိပ် (External Hemorrhoids) ဆိုတာက စအိုပတ်လည်နဲ့ အဝနားက သွေးကြောဖောင်းတွေကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဖောင်းကြွနေတာကို လက်နဲ့ စမ်းကြည့်လို့ရပြီး ဝမ်းသွားရင် နာကျင် ယားယံပါတယ်။ မခံမရပ်နိုင်အောင် နာလာပြီ ဆိုရင်တော့ အပြင်လိပ်မှာ သွေးခဲပိတ်ပြီလို့ ယူဆရပြီး အမြန်ဆုံး ကုသမှု ခံယူသင့်ပါတယ်။
အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းက ခြောက်ချက်လောက် ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ...
(၁) အထိုင်များခြင်း- နေ့စဉ် နာရီပေါင်းများစွာ ထိုင်တဲ့သူဟာ လိပ်ခေါင်း ပြဿနာနဲ့ တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်တော့ ရင်ဆိုင်ရလာ နိုင်ပါတယ်။ တောက်လျှောက် မနားတမ်း ထိုင်ရရင် ပိုနီးစပ်ပါတယ်။
(၂) ဝမ်းချုပ်တတ်သော အကျင့်ရှိခြင်း- ဝမ်းကို ညှစ်ပြီး သွားရပါများလို့ ကြုံလာရတဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) အသက်အရွယ် ရလာခြင်း- လိပ်ခေါင်းရောဂါဟာ အသက်အရွယ်နဲ့ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ တိုက်ရိုက် အချိုးကျပါတယ်။ အသက်ကြီးလာလေလေ ကြွက်သားတွေ၊ သွေးကြောတွေ ပုံမှန် မဟုတ်တော့တဲ့ အတွက် လိပ်ခေါင်း ဖြစ်လာနိုင်သလို အထိုင်များတဲ့ အကျင့်ပါရှိရင် အတော်လေး နီးစပ်ပါတယ်။ အသက် ၅၀ ကျော်ပြီးသား လူတိုင်းရဲ့ တစ်ဝက်ကျော်ဟာ လိပ်ခေါင်း ရှိနေတတ်တယ်လို့ တွေ့ရှိရပါတယ်။
(၄) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း- အမျိုးသမီးတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ကြီးရင့် လာတာနဲ့အမျှ အစာဟောင်းအိမ် (Rectum) အပေါ်ကို ဖိအား သက်ရောက်မှု များလာစေပြီး သွေးကြောတွေ ပိတ်ကာ လိပ်ခေါင်း ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
(၅) အလေးအပင် မရခြင်း- အလေးတစ်ခု မရတိုင်း စိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့ အားရဲ့ဒဏ်ကို ခန္ဓာကိုယ်ကပဲ ပြန်ခံရပါတယ်။ မနိုင်ဝန် ထမ်းရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ အလေးအပင် မရတဲ့ အလုပ် လုပ်သူတွေဟာ အချိန်ကြာလာရင် လိပ်ခေါင်းရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်စွမ်းဟာ သူများတွေထက် များလာပါတယ်။
(၆) အသည်းရောဂါရှိခြင်း- အသည်းခြောက်ခြင်းလိုမျိုး နာတာရှည် အသည်းရောဂါ တစ်ခုခုရှိရင် သွေးပြန်ကြောများ အတွင်း ဖိအားကို တက်စေပြီး လိပ်ခေါင်း ဖြစ်လာစေပါတယ်။
မနာကျင်ဘဲ ဝမ်းသွားရင် သွေးပါတာက အဖြစ်အများဆုံးပါပဲ။ ဒါကြောင့် အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့နေရင် အတော်လေး နောက်ကျမှ သတိထား မိပါတယ်။ ဝမ်းသွားရင်း သွေးစိမ်း ရှင်ရှင်ပဲပါပါ၊ သွေးမည်းမည်းပဲပါပါ ဒါဟာ အလွန် အရေးကြီးတဲ့ အခြေအနေ တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ဆရာဝန် ပြရပါမယ်။ လိပ်ခေါင်းကြောင့် သွေးထွက်ခြင်းဟာ သူ့အလိုလို ပျောက်ပျောက်သွားတဲ့ သဘာဝရှိလို့ ပြန်ကောင်းသွားပြီ ဆိုပြီး ပေါ့နေကာ လိပ်ခေါင်း အမြစ်တွယ်သွား တတ်ပါတယ်။ သွေးဆုံးရှုံးမှု ကာလ ကြာလာရင် သွေးအားနည်းခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်တဲ့ မူးဝေခြင်း၊ ဖြူဖျော့ခြင်း၊ အားအင်ကုန်ခန်းသလို ခံစားရခြင်း၊ ပင်ပန်းလွယ်ခြင်း စတာတွေ ဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သန့်ရှင်းရေး ဂရုမစိုက်ရင် လိပ်ခေါင်းကို ပိုးဝင်ပြီး ရောင်ရမ်း ဖျားနာခြင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
သွေးတစ်စက်စက် ကျနေခြင်း အလွန်အမင်း နာကျင်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်း ဖျားနာခြင်းတွေ မရှိဘူးဆိုရင်၊ စောစီးစွာ သတိထားမိတယ် ဆိုရင် နေထိုင်မှုပုံစံ ပြုပြင် ပြောင်းလဲခြင်း (Lifestyle Modification) တစ်ခုတည်းနဲ့ သက်သာ ပျောက်ကင်းသွားအောင် ကုသလို့ ရပါတယ်။ ရောဂါမရှိသေးတဲ့ သူတွေလည်း လိုက်နာရင် ကင်းဝေးနိုင်ပါတယ်။
(၁) ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ပဲအမျိုးမျိုးတို့ကို နေ့စဉ်စားပါ။ ရေလုံလောက်စွာ သောက်ပါ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသား လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ကို ရေ ရှစ်ဖန်ခွက်စာ လိုပါတယ်။ မနက် မိုးလင်းလာရင် ရေသောက်ပြီး ဝမ်းသွားနေကျ အကျင့်ကို မွေးမြူခြင်းဟာ လိပ်ခေါင်းရောဂါ ကုသ ကာကွယ်နိုင်ရုံမက ကျန်းမာရေးကို အထူး အကျိုးပြုပါတယ်။ အချိန်မှန် ဝမ်းသွားတဲ့ အကျင့်ကို မွေးမြူနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
(၂) သင့်တင့်တဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု လုပ်ချိန် စုစုပေါင်း တစ်ပတ်လျှင် အနည်းဆုံး ၂ နာရီခွဲ ရှိပါစေ။
(၃) အထိုင်များတဲ့ အလုပ်ကို ရှောင်မရရင်လည်း နာရီဝက် တစ်ခါ ဟိုနားဒီနား လမ်းထလျှောက်တဲ့ အကျင့်ကို မွေးမြူပါ။ တောက်လျှောက် ထိုင်တဲ့သူတွေထက်စာရင် လိပ်ခေါင်း ပြဿနာ ကြုံရမှုကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်တာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
(၄) အလေးအပင် မချိန်မှာ အသက်ကို ရှူထုတ်ပါ။ အလေးမလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အသက်ရှူသွင်းခြင်း၊ ရှူသွင်းပြီးသား အသက်ကို အောင့်ထားခြင်းတွေ မလုပ်ပါနဲ့။
(၅) ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ ပက်လက်အိပ်ခြင်းကို ရှောင်ပါ။ ဘေးတစောင်း အိပ်ရာမှာ ညာဘက်စောင်း အိပ်ခြင်းက နှလုံးကို သက်သာစေလို့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
(၆) လိပ်ခေါင်းကို ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက် ရတယ်ဆိုတာ အတော်လေး ရှားပါတယ်။ အထက်ပါ အချက်တွေကို မှန်မှန်လိုက်နာ သွားရုံနဲ့ တော်ရုံက ပြန်ကောင်းသွားပါတယ်။ ဝေဒနာ ပြင်းထန်ပြီး သွေးထွက်မှုက မရပ်တော့ဘူး ဆိုရင်တော့ ယနေ့ခေတ်မှာ ရရှိနိုင်တဲ့ ကုသမှုတွေအနက် တစ်ခုကို ဆရာဝန်ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ ရွေးချယ်ရပါမယ်။
(၇) အဲဒါတွေကတော့ Rubber Band Ligation ခေါ် သားရေပင်စည်းခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ ကြွေသွားစေသော Coagulation Therapy၊ သွေးထွက် အရမ်းများနေခြင်း၊ အတွင်းလိပ်များ ရှိနေခြင်း ဆိုရင် လိပ်ခေါင်း ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားမှု (Hemorrhoidectomy) လုပ်ရပါမယ်။ ဒါတွေမလုပ်ခင် သွေးပြန်ကြောအတွင်း ဖိအားနဲ့ နာကျင်မှုများ သက်သာအောင် လိမ်းဆေး၊ ထိုးဆေး၊ သောက်ဆေး၊ ဝမ်းပျော့ပျော့ သွားအောင် ဆေးတွေပေးပြီး ကုသပါတယ်။ မရတော့မှ လုပ်တာပါ။ ဒါကတော့ သက်ဆိုင်ရာ ခွဲစိတ် အထူးကုရဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်ချက် အရ ဖြစ်ပါတယ်။ သားရေပင်နည်း သို့မဟုတ် Coagulation Therapy နဲ့ ခွဲစိတ်မှုကို ပေါင်းပြီး လုပ်တာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကပိုပြီး ရလဒ် ကောင်းတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန် မဖြစ်မနေ ပြရမလဲ
သွေးထွက်များရင်၊ တောက်လျှောက် ရက်ဆက် ထွက်နေရင်၊ သွေးအားနည်း လက္ခဏာတွေ ခံစားလာရရင်၊ ရုတ်တရက် နာကျင်မှု အရမ်း ဆိုးလာရင်၊ နာကျင်မှုနဲ့ ဖျားနာမှု တွဲဖြစ်ရင်၊ သွေးဝမ်းသွားရင် ကုသမှု ခံယူသင့်ပါပြီ။
မုဒိမ်းမှုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဟာ ထောင်ထဲမှာ ရောက်နေတဲ့ မုဒိမ်းသမားတွေကို အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ ဆီက အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စေနိူင...်တဲ့ အချက်အလက် တွေကိုလေ့လာပြီး ပြန်လည်ဝေမျှ လိုက်ရခြင်းဖြစ် ပါတယ်…
(၁) မုဒိမ်းကောင် တစ်ယောက်ဟာ မုဒိမ်းကျင့်ခါနီး အရင်ဦးဆုံး သတိထားကြည့်တာ ဆံပင်ပုံစံပါ။ နောက်ဆံပင်ကို အရင်းပိုင်းစုစည်းပြီး ဆံပင်အရှည်ချထားတဲ့ပုံစံ၊
ဆံထုံးထုံးထားတဲ့စံပင်ပုံစံ၊ ကျစ်ဆံမြှီးပုံစံ နဲ့ တခြား သူတို့ အလွယ်တကူ ဆံပင်ဆောင့်ဆွဲလို့ကောင်းတဲ့ ပုံစံတွေကို ရွေးချယ်တတ်ကြပါတယ်။ ဆံပင် အတိုနဲ့ မိန်းကလေး ထက် ဆံပင်အရှည်နဲ့ မိန်းကလေးကို သူတို့ရဲ့သားကောင်အဖြစ် ပိုရွေးချယ်တတ်ကြပါတယ်။
(၂) ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ အ၀တ်အစားပါ။ မုဒိမ်းကောင်တွေဟာ အ၀တ်အစားအလွယ်တကူ ချွတ်ပစ်လို့ရမယ့် မိန်းကလေးမျိုးကို ရွေးချယ်ကြပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ မုဒိမ်းကောင် အများစုဟာ အ၀တ်အစားတွေကို ဖြတ်ပစ်ဖို့ ကတ်ကြေး ယူဆောင်လာတတ်ကြပါတယ်။
(၃) မုဒိမ်းကောင်တွေဟာ ဖုန်းအသုံးပြုနေတဲ့မိန်းကလေးမျိုး၊ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက တစ်ခုခု ရှာဖွေနေတဲ့မိန်းကလေးမျိုး ဒါမှမဟုတ် လမ်းလျှောက်ရင်း တစ်ခုခု အာရုံစူးစိုက်မှုလုပ်နေတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးကို
အဲ့လိုမျိုး တစ်ခုခု အာရုံစူးစိုက်နေတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ရုတ်တရက်မို့ သူကိုယ့်သူ ကာကွယ်ဖို့မလွယ်ပါဘူး၊ရုတ်တရက်မို့လို့ မွှန်ထူပြီး တုန့်ပြန်မှုနည်းတဲ့အတွက် မုဒိမ်းကောင်တွေအတွက် လွယ်ကူပါတယ်။
(၄) မုဒိမ်းကောင်တွေ အမျိုးသမီးတွေကို မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ အများဆုံးခေါ်သွားတဲ့နံပါတ်တစ်နေရာကတော့ ကုန်တိုက်တွေ ရဲ့ကားပါကင်ပါပဲ။ ( မှတ်ချက် ။ ။ ဒါကတော့ သူတို့နိူင်ငံတွေအတွက်ပြောတာပါ။ ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့ သိပ်မကိုက်သေးသလိုပါပဲ။ )
(၅) နံပါတ် ၂ နေရာကတော့ ရုံးခန်းတွေရဲ့ကားပါကင်နေရာ၊ ဓာတ်ဆီဆိုင်လိုနေရာမျိုးတွေပါ။
(၆) နံပါတ် ၃ နေရာကတော့ အများပြည်သူသုံး သန့်စင်ခန်း(စည်ပင်အိမ်သာ)တွေပါ။
(၇) နောက်တစ်ခုကတော့ မုဒိမ်းကောင်တွေဟာ ဒုတိယနေရာ (သူတို့အတွက် မဖမ်းမိစေရန် လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာ) ကို မိန်းကလေးတွေကို အလျင်အမြန် ဆွဲခေါ်သွားကြပါတယ်။
(၈) တကယ်လို့သာ သင်ဟာ နည်းလမ်းပေါင်းစုံ/ ရုန်းကန်မှုမျိုးစုံနဲ့ မုဒိမ်းကောင်ကို တက်နိူင်သမျှတိုက်ခိုက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့အတွက် စိတ်ဓာတ်ကျ/စိတ်ကုန်အားလျော့မှုကို ဖြစ်စေနိူင်ပါတယ်။
သင်ရုန်းကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ အချိန်က တစ်မိနစ် ဒါမှမဟုတ် ၂ မိနစ်လောက်ပဲ ကြာနေပါစေ သင်ဟာ သူတို့ထင်သလောက် လွယ်ကူမှုမရှိဘူး ဆိုတာကို သူတို့ သဘောပေါက်လာနိူင်ပါတယ်။ဒါကတော့ မုဒိမ်းးကောင်ကို စိတ်ဓာတ်ကျသွားစေဖို့ အချိန်ကို တတ်နိူင်သမျှ ဆွဲဆန့်ခြင်းနဲ့ ကာကွယ်နည်းတစ်မျိုးပါပဲ။
(၉) မုဒိမ်းကောင်တွေဟာ ထီး(သို့) အလားတူပစ္စည်းတစ်ခုခုလက်မှာ ကိုင်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို မရွေးချယ်တတ်ကြပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုပစ္စည်းတွေဟာ သူတို့ကို အဝေးကနေတောင်မှ တိုက်ခိုက်နိူင်လို့ပါပဲ။
(၁၀) သော့ချောင်းတွေဟာ လက်နက်တစ်ခုအနေနဲ့ သူတို့ကို ဟန့်တားအောင်လုပ်ဖို့ ဆိုရင် အလွန်နီးကပ်မှ ဖြစ်နိူင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက် လွယ်ကူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Something is better than nothing ဆိုသလိုပေါ့။ ဘာမှမလုပ်တာထက်စာရင် တစ်ခုခုလုပ်လိုက်တာက ပိုကောင်းတဲ့သဘော ပါပဲ။
အဲ့လိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခြင်းဟာ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ သူတို့ထင်သလောက် လွယ်ကူမှုမရှိတဲ့ အတွက် စိတ်ဓာတ်ကျမှုကို အနည်းနဲ့အများဖြစ်စေနိူင်ပါတယ်။
(၁) လမ်း၊ဓာတ်ဆီဆိုင်၊ဓာတ်လှေခါးနဲ့ အဆောက်အအုံတွေရဲ့လှေခါးအကွေ့နေရာမျိုးတွေမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်အနောက်ကနေ လိုက်လာနေတယ်ဆိုပါဆို့ အဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာကို သေချာကြည့်ပါ
ထို့နောက် သူ့ကို မေးခွန်းတစ်ခုတစ်လေလောက်မေးပါ(စကားစမြည်သဘောမျိုးပေါ့)၊ ဥပမာ - ဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲ? ၊ အပြင်မှာ အရမ်းအေးတယ်နော်၊ ဒီနှစ်ဆောင်းရာသီက တော်တော်ဆိုးတာပဲ စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။
အဲ့လိုပြောခြင်းအားဖြင့် ပထမအချက်က သင်အဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာကို သေချာမြင်ဖူးသွားပြီ၊ ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ အဲ့ဒီလူကို အကဲခတ်နိူင်မယ်။ ဒါကြောင့် မုဒိမ်းကောင်ဟာ ပစ်မှတ်ပြောင်းသွားနိူင်ပါတယ်။
(၂) တကယ်လို့ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ဆီကို ဦးတည်လျှောက်လာပြီး သင့်လက်တွေကို ချူပ်ကိုင်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အကျယ်ကြီးအော်ပစ်ပါ၊ “ရပ်စမ်း.. ဝေးဝေးသွားစမ်း” စသဖြင့် အမိန့်ဆန်ဆန်ပြောဆိုပါ။
မုဒိမ်းကောင် အများစုပြောကြတာကတော့ အရမ်းအော်ဟစ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ၊ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့ ကြောက်ရွံမနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုရင် ဆက်မကြိုးစားချင်တော့ပါဘူး။ ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ သူတို့ထက်ပိုလွယ်တဲ့ တစ်ခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုပဲ ထပ်ရှာပါတယ်။
(၃) တကယ်လို့ သင့်မှာ ငရုတ်ကောင်းရည်ဖျန်းဘူး ( spray တစ်ခုခုပေါ့ ) ပါခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒါကိုလက်မှာကိုင်ထားပြီး “ငါ့မှာ ဒီ spray ဘူးရှိတယ်..” လိုအော်ပြီး မုဒိမ်းကောင်ကို သတိပေးပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျန်းပက်ပစ်ပါ။ (မူရင်းစာရေးသူကတော့ ဒီ Pepper Spray လို့ခေါ်တဲ့ Spray ဘူး ကိုပြည့်အ၀ အားပေးထောက်ခံထားပါတယ်။ )
(၄) တကယ်လို့ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုဆွဲခေါ်သွားနေပြီ၊ ခွန်အားချင်းမမျှလို့ သင်သူ့ကို ပြန်လည်ရိုက်နှက် တိုက်ခိုက်လို့မရနိူင်ပေမယ့် ကိုယ်တက်နိူင်တာနဲ့ ထိရောက်အောင်လုပ်နိူင်ပါသေးတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ ဆွဲဆိတ်ခြင်းပါပဲ။ ဆွဲဆိတ်တယ်ဆိုတာက အင်အားလည်း အများကြီးမလိုပါဘူး။ ခံရသူအဖို့လည်း တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ ခါးပိုင်းနေရာ ၊ လက်မောင်းကနေ တစ်တောင်ဆစ်ချိုးမရောက်ခင်နေရာ ၊ ပေါင်အတွင်းပိုင်း နေရာတို့ကို ပြင်းပြန်ထန်ထန်ကို ဆွဲဆိတ်ပစ်ပါ။
သွေးထွက်အောင်အထိအားကုန်သုံးပြီး ဆွဲဆိတ်ပစ်ပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ သန်မာတယ်ပြောပြော၊ ခွန်အားကြီးတယ်ပြောပြော၊ အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကို ဆွဲဆိတ်တဲ့ဒဏ်ကိုတော့ မခံနိူင်ကြပါဘူး။ သင်မယုံရင် သင့်ကိုယ်သင်သာ အရင်ဆုံး ဆွဲဆိတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
(၅) ဆွဲဆိတ်ခြင်း၊ ပေါင်ခြံလိုနေရာမျိုးကို ရိုက်နှက်ခြင်းတွေဟာ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးကို မမျှော်လင့်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက် မလွယ်ကူလှပေမယ့် အဲ့ဒါတွေဟာ တကယ်ပဲ သူ့ကို နာကျင်စေမှာပါ။ သင်ကတော့ သူ့ကို နာကျင်စေတာဟာ သူ့ကိုဒေါသပိုထွက်စေတယ်လို့ ထင်နေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် လေ့လာစမ်းစစ်မှုအရတော့ မုဒိမ်းကောင်တွေဟာ သူတို့ကို ဒုက္ခရောက်အောင်၊
အချိန်ကြန့်ကြာအောင် မလုပ်တဲ့မိန်းကလေးမျိုးကိုပဲ အလွယ်တကူ အလိုရှိတာပါ။ သူတို့ကို ဒုက္ခတွေ အများကြီးရောက်အောင် ရိုက်နှက်ပြီး နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ရုန်းကန်နေတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးဆိုရင်တော့ စွန့်ခွာသွားတတ်ကြပါတယ်။
(၆) မုဒိမ်းကောင်ရဲ့လက်ဟာ သင့်အပေါ်သို့ကျရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ သူ့လက်ချောင်း ၂ ချောင်းကို ဆောင့်ဆွဲပါ၊ လိမ်ချိုးပစ်ပါ၊ ဟိုဘက်ဒီဘက် ဆွဲဖြဲပစ်ပါ၊ တက်နိူင်သမျှ အားအကုန်သုံးပြီးတော့ ချိုးပါ။ အဲ့ဒီနည်းကလည်း အားသိပ်မပါဘဲနဲ့ စမ်းကြည့်တာတောင် နာလွန်းလို့ ဒူးထောက်ပီး အော်လိုက်ရပါသေးတယ်။
(၇) ပတ်ဝန်းကျင်ကို အမြဲတမ်း သတိမူပြီးနေပါ။ တစ်ခုခု ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့/အမူအယာထူးခြားတဲ့ လူတွေ့မိရင် ပေါ့ပေါ့လေးမနေပါနဲ့၊ သတိကြီးကြီးထားနေပါ။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာ သင့်ကိုယ်သင် ကလေးကလား အကြောက်လွန်နေတယ်လို့မထင်ပါနဲ့၊ ဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်သွားနိူင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိူင်ရင်တော့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သင်နဲ့အတူအဖော်ခေါ်သွားပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဒါလေးတွေကိုလည်း မှတ်သားထားစေချင်ပါတယ်…
သင်သိထားသင့်တဲ့ အချက်အလက်တွေပါ။ သင်ဖတ်ပြီးသွားရင်လည်း သင်ဂရုစိုက်ရတဲ့လူတွေဆီကို ဆက်လက်မျှဝေပေးလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ သတိဆိုတာ ပိုတယ်လို့မရှိပါဘူး -
(၁) တိုက်ကွန်ဒို သိုင်းပညာမှာတော့ တံတောင်ဆစ်ဟာ လူ့ခန္ဒာကိုယ်ရဲ့ အသန်မာဆုံး အပိုင်းလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် တံတောင်ဆစ်နဲ့ တွတ်လို့ရမယ့်အခြေအနေမျိုးဆိုရင် လက်လွတ်မခံပါနဲ့။
(၂) နယူးအော်လန်မြို့ရဲ့ ခရီးသွား လမ်းညွှန်ထဲမှာဖတ်ရတာတော့ - တကယ်လို့သာ ခါးပိုက်နှိုက်တွေ လုယက်တဲ့လူတွေ၊ ဓားပြ တွေက သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ကိုတောင်းမယ်ဆိုရင် သင့်လက်နဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ကမ်းမပေးပါနဲ့။ သင်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာကို လွှင့်ပစ်ပြီးပေးပါ။ ဒီဒုစရိုက်သမားဟာ လူထက် ပိုက်ဆံကို ပိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သူ ပိုက်ဆံအိတ်ကို သွားကောက်မှာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာ တွေဝေမနေဘဲ သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုသာ ပြေးပါ။
(၃) သင်ဟာ ကာနောက်ဖုံးထဲကို ထည့်ခံထားရတယ်ဆိုရင်တော့ ကားနောက်မီး ရှိတဲ့နေရာကို ကန်ကြောက်ပစ်ပါ၊ အဲ့ဒီအပေါက်ကနေ လက်ကိုထုတ်ပြီးတော့ တတ်နိူင်သမျှ ဝေ့ရမ်းပါ။ ကားမောင်းတဲ့လူကတော့ မမြင်နိူင်ပေမယ့် တစ်ခြားလူတွေက မြင်နိူင်ပါတယ်။ ဒါကလည်း သင့်ဘ၀ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကယ်တင်နိူင်မှာပါ။
(၄) အမျိုးသမီး အများစုဟာ အလုပ်မှအပြန်၊ စားသောက်ဆိုင်မှ အပြန် နှင့် ဈေးဝယ်ခြင်းတို့မှအပြန်တွင် ကားပေါ်တက်ကာ ချက်ချင်း မောင်းမထွက်ပဲ ထိုင်နေတတ်ကြပါတယ်။ မှတ်စုတွေ မှတ်နေတာမျိုး၊ စာတစ်ခုခု ကိုခဏဖတ်နေတာမျိုး စသဖြင့် လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ မလုပ်ပါနဲ့ ၊ တဏှာရူးကောင်တွေ လူယုတ်မာတွေက သင့်ကို စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။
အဲ့ဒီလို အခြေအနေဟာ သူတို့အတွက် အကောင်းဆုံး အခွင့်အလမ်းဖြစ်နေလို့ပါ။ သင့်နောက်ကခုံမှာဝင်ထိုင်ပြီး သင့်ခေါင်းကိုသေနတ်နဲ့ထောက်ကာ “ဘယ်နေရာကို မောင်းပါ” လို့ ပြောခံရနိူင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကားပေါ်မှာ တက်ထိုင်ပြီးပြီးချင်း ချက်ချင်းဆိုသလို မောင်းထွက်သွားပါ။ ဆိုင်းငံ့မနေပါနဲ့။
(၅) ဒါကတော့ ကားပါကင် တွေ ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေမှာ သင့်ကားထဲကို ပြန်ဝင်တော့မယ်ဆိုရင် သတိထားရမယ့် အချက်တွေဖြစ်ပါတယ် ..
(က) ကားထဲမ၀င်ခင် ကားထဲမှာ တစ်ယောက်ယောက်ပုန်းနေနိူင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြင့် ကားဘေးပတ်ပတ်လည်နဲ့ ခရီးသည်ထိုင်နေရာတွေ ၊ ကြမ်းပြင်တွေကို သတိနှင့်ချောင်းကြည့်ပါ။ ( တက္ကဆီ ငှားစီးမယ်ဆိုလည်း ထိုနည်း၎င်း သတိထားကြည့်ပါ။ )
(ခ) တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ ကားဘေးနားမှာ van / town ace စတဲ့ကားမျိုးတွေ ရှိနေမယ်.. သင်္ကာမကင်းဖြစ်ရတယ် ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီကားရဲ့ တစ်ခြားဖက် အပေါက်မှတဆင့်သာ သင့်ကားထဲသို့ဝင်ပါ။
( သင့်ကားရဲ့ ယာဉ်မောင်းဘက်ခြမ်းမှာ ရပ်ထားမယ်ဆိုရင် ခရီးသည်ထိုင်တဲ့ဘက်မှဝင်ပါ။) ဒုစရိုက်ကောင်တွေဟာ အမျိုးသမီးတွေ ကားထဲဝင်ခါနီးအချိန်တွေမှာ သူတို့ကားထဲကို ဆွဲခေါ်ပြီး တံခါးပိတ်တတ်ကြပါတယ်။ သတိထားနိူင်ဖို့ပါ။
(ဂ) သင့်ရဲ့ကား အနီးတစ်ဝိုက်ကို ရှာကြည့်ပါ။
အနီးဆုံးနေရာမှာ သူစိမ်းတစ်ယောက်က အကြောင်းမဲ့ထိုင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ကားထဲမ၀င်ပါနဲ့ဦး။ သင်လာခဲ့တဲ့ အလုပ်ဖြစ်စေ၊ ဈေးဝယ်စင်တာ တစ်ခုခုဖြစ်စေ ပြန်ဝင်သွားပါ။ ရဲတစ်ယောက်ယောက်၊ ဒါမှမဟုတ် အစောင့်တစ်ယောက်ယောက်ကို ခေါ်ပြီးမှပြန်လာပါ။
ဒါတွေဟာ အပိုအလုပ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်မကောင်းစရာ အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သွားတာထက်စာ ရင် အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်။ သူများအပေါ် သံသယလွန်ကဲမှု / အယုံအကြည်နည်းမှုဟာ မိမိကိုယ်တိုင် ဒုက္ခရောက်ရတာထက်စာရင် အများကြီး အကျိုးရှိပါတယ်။
(၆) ရိုးရိုးလှေခါးတွေအစား ဓာတ်လှေခါးကိုအမြဲ အသုံးပြုပါ။ လှေခါးအကွေ့တွေဟာ တစ်ယောက်ထဲ သွားဖို့အတွက် မသင့်တော်ပါဘူး။ ဒုစရိုက်မှုတွေအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုပါပဲ။
(၇) တကယ်လို့ အဲ့ဒီလူယုတ်မာဆီမှာ သေနတ်ပါလာတယ်ဆိုရင်လည်း သင်ဟာ သူ့ထိန်းချူပ်မှုအောက်မှာ ရှိမနေပါဘူး။ ပြေးသာပြေးပါ။ လှုပ်ရှားနေတဲ့ပစ်မှတ်ကို ထိအောင်ပစ်ဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူး။ အကြိမ် ၁၀၀ မှာ ၄ ကြိမ်သာ ထိနိူင်ပါတယ်။ ထိတယ်ဆိုရင်တောင်မှာ အရေးကြီး အစိတ်အပိုင်းတွေမဖြစ်နေပါဘူး။
( မှတ်ချက်။ ။ မူရင်းစာရေးသူကတော့ အလျော့မပေးဖို့ကို ဆိုလိုချင်တာဖြစ်နိူင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ တစ်ချို့အရာတွေမှာ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကို သုံးသပ်ပြီးမှ ကိုယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကိုယ်မှန်အောင်ချနိူင်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ )
(၈) အမျိုးသမီးတွေဟာ စာနာစိတ်၊ ကိုယ်ခြင်းစာ ကရုဏာစိတ် ၊ လိုက်လျောတဲ့စိတ်တွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ သင့်အတွက်မကောင်းပါဘူး။ Ted Bundy ဆိုတဲ့ လူသတ်သမားတစ်ယောက်ဟာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အဲ့ဒီစိတ်တွေကို အမြဲအသုံးချခဲ့ပါတယ်။
သူက ဒုတ်ကောက်တစ်ချောင်း ဒါမှမဟုတ် ခြေထောက် တစ်ဖက်ဆာပြီးတော့ လမ်းလျှောက်ပါတယ်။ ပြီးတဲ့နောက် သူဟာ သူ့ရဲ့ ပစ်မှတ်သားကောင် ဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေး ကို သူ့ကားထဲကို ပို့ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းပါတယ်။ ကားထဲရောက်သွားရင်တော့ သင့်ကို သူအတင်းခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ခြေနှစ်ချောင်းမကယ်ကောင်းဆိုတဲ့ စကားပုံအတိုင်း မလိုအပ်ရင် မသနားပါနဲ့လို့အကြံပေးပါရစေ။
ဒီစာကို ဖြစ်နိူင်ရင် ခင်ဗျားတို့ပတ်ဝန်းကျင်က အမျိုးသမီးတွေ အကုန်လုံးဆီကို share ပေးစေချင်ပါတယ်။ဒီစာက ဘ၀ တစ်ခုကို ကယ်တင်စောင့်ရှောက်နိူင်မယ်ဆိုခဲ့ရင် အလွန်ပီတိဖြစ်စရာပါ။ ဖရောင်းတိုင် တစ်ခုက တစ်ခြားဖရောင်းတိုင်တစ်ခုကို မီးကူးပေးလိုက်လို့ ပထမ ဖရောင်းတိုင်ရဲ့မီးရောင်ဟာ မှေးမှိန်မသွားနိူင်ပါဘူး။
ဒီစာကို ကျွန်တော်က အမျိုးသမီးတွေ ဖတ်ဖို့အတွက်ပဲရေးထားတယ်ဆိုပေမယ့် ဖတ်မိတဲ့ညီ၊အကိုတွေမှာလည်း အမေ၊အမ၊နှမ၊သမီး နဲ့ ချစ်သူ၊သူငယ်ချင်းတွေ ရှိမှာပါ၊ သူတို့တွေအတွက်လည်း စေတနာရှေ့ထားပြီး ဖြန့်ဝေပေးစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ လောကကြီးမှာ ဒီလိုဒုစရိုက် တဏှာရူးကောင်တွေ အများကြီးပါပဲ။ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အခုလို ကူညီ အသိပေးခြင်းဟာ တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးသွားတော့မှ စိတ်မကောင်းဘူး ပြောတာထက်စာရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ခု ရင်ထဲရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲ ကျေနပ်ပါတယ်။
Credit to Yote Thayyote
တီထွင် ဆန်းသစ်မှုများနှင့် ပါရမီ ရှိသူများ အား ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် လေ့လာ သွားမည့် Telenor Myanmar
Telenor Myanmar အနေနဲ့ ပြည်တွင်းမှာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးတက်လျက်ရှိတဲ့ web developer အဖွဲ့များ အပြင် တီထွင် ဆန်းသစ် မှုများနဲ့ ပါရမီရှိသူများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့အတွက် ယခုလာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ လမှာ ကျင်း ပမယ့် Barcamp Yangon(2014) တွင် လေ့လာသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။Telenor Myanmar ဟာဆိုရင်လည်း Barcamp Yangon(2014) ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကို ကူညီထောက်ပံ့ သူ တစ် ဦး အဖြစ် ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Barcamp Yangon(2014) ဟာ နိုင်ငံတကာနည်းပညာနဲ့ Developer တွေအတွက် တွေ့ဆုံပွဲဖြစ်သလို ပြည်တွင်း ရဲ့ ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးကဏ္ဍ တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ တီထွင် ဖန်တီး သူများ စတာတွေကိုလည်း စုစည်းပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
မိုဘိုင်းလ် ဆက်သွယ်ရေး ဟာ အားလုံးအတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အပြင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဘဏ်လုပ် ငန်းတွေ အပါအ၀င် ကဏ္ဍအသီးသီးရဲ့ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာလည်း မိုဘိုင်းလ်နည်းပညာတွေကို ဗဟိုနည်း လမ်း တစ်ခု အနေနဲ့ အသုံးပြုလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ Telenor Myanmar မှ တာဝန်ရှိ သူ တစ်ဦး ရဲ့ ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ Barcamp Yangon(2014) ကိုတော့လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်နဲ့ (၂) ရက်နေ့တွေ မှာ မြန်မာအင်ဖိုတက်ထဲမှာ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
မသန်စွမ်း ဦးရေကို တိုးပွား လာစေတဲ့ ယာဉ် မတော် တဆမှုများ
ကား တင်သွင်းခွင့်တွေ ကို လွတ်လပ်စွာ တင်သွင်း ခွင့်ပြု ခဲ့ပြီးနောက်မှာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နေရာ တိုင်း လိုလို မှာကား လမ်း ပိတ်မှုတွေ၊ ကားကြပ်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေသလို ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်မှုတွေလည်း ဖြစ်ပေါ်နေ ပါ တယ်။ ယာဉ်မတော်တဆမှုတွေကြောင့် သေဆုံးနေတဲ့ သူတွေရှိသလို ဒဏ်ရာ အနာ တရဖြစ် ပြီး မသန် စွမ်းဖြစ် သွားတဲ့ လူဦးရေဟာလည်း တဖြေးဖြေးတိုးပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီလိုယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးမသန်စွမ်းဦးရေ များပြားလာတာဟာ ယာဉ်မောင်းတွေရဲ့ မဆင် မခြင် မောင်းနှင် မှုကြောင့်တင်မကဘဲ ခရီးသွားပြည်သူတွေရဲ့ လမ်းစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှု၊ယာဉ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ လိုအပ် မှုတွေ ဟာလဲ အဓိကအကြောင်းအရင်းတွေ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရထား တိုက်ခံရ မှုတွေကြောင့် မသန်စွမ်း အရေအတွက် များပြားလာတာတွေလည်းရှိတာမို့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ရထားလမ်း ကူးတဲ့ နေရာမှာ သတိထားကူးခြင်း၊ ရထားပေါ်တက်တဲ့အခါမှာ ဂရုစိုက်တက်ခြင်းများကို သတိ ထားဆောင် ရွက်သင့်တယ်လို့သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ မသန်စွမ်းဦးရေဟာ၂.၃၂ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့သိရပြီး မွေးရာပါ မသန်စွမ်း အပြင်၊ ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ မသန်စွမ်းဦးရေဟာ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် များပြား လာတယ် လို့ သိရပါတယ်။ WHOရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရလဲ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မသန်စွမ်းဦးရေဟာ အရင် ၁၀ရာခိုင်နှုန်း ကနေ လက်ရှိမှာ၂၀ရာခိုင်နှုန်း အထိမြင့်တက်လာနေတယ်လို့သိရပြီး ဒီလိုမြင့်တက် လာတာ ဟာ မွေးရာပါ မသန်စွမ်းအပြင် ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် လည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီလိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မသန်စွမ်းအရေအတွက်များပြားလာသလို မသန်စွမ်းဖောင်ဒေးရှင်းတွေ လဲများပြား လာပြီး အဲဒီ့ဖောင်ဒေးရှင်းတွေဟာလဲ မသန်စွမ်းဖြစ်သွားတဲ့ ပြည်သူတွေကို လက်လှမ်း မှီသလောက် လိုက် လံစာ ရင်းကောက်ပြီး ကူညီဖေးမလျက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
မောင်တောဖြစ်ရပ်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတင်းဌာနများအနေနှင့်မှန်ကန်သည့် သတင်းကိုသာထုတ်ပြန်ရေးသားသင့်ကြောင်း အစိုးရမှရှင်းလင်းခဲ့ခြင်း
အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်နေတဲ့ AP သတင်း ဌာန နဲ့ ဧရာဝတီ သတင်း ဌာတို့ရဲ့ သတင်းဖော်ပြချက်ဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောမြို့နယ် ဒုချီးရား တန်းကျေးရွာ ဖြစ်စဉ် နဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုဇန်န၀ါရီလ၂၈ ရက်နေ့မှာ အစိုးရက သတင်းစာ ရှင်းလင်း ပွဲ ပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်စဉ်မှန် ကိုဖော် ထုတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်း စာရှင်း လင်းပွဲမှာတော့ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး ဌာနနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခစုံစမ်းရေးကော်မရှင်တို့က တက်ရောက်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ သံရုံး တာဝန် ခံတွေ၊ ကုလသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်း မီဒီယာတွေ ရဲ့မေးမြန်းမှုတွေ ကိုလည်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
သတင်းစာရှင်းလဲပွဲမှာရခိုင်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ထိခိုက်တဲ့ အကြမ်း ဖက်ဖြစ် စဉ်ဖြစ်ပြီး သတင်းဌာနတွေအနေနဲ့ မှန်ကန်တဲ့အခြေအမြစ်ရှိမှသာ သတင်းထုတ်ပြန်သင့် တယ် လို့ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မောင်တောမြို့နယ် ဒုချီးရားတန်းကျေးရွာ အလယ်ရွာမှာဇန်န၀ါရီလ (၁၃)ရက်နေ့က လုံခြုံရေး ကင်းလှည့်နေ တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်(၈)ဦးကို ကျေးရွာနေဘင်္ဂါလီတွေက ၀ိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပြီးနောက် အဲဒီကျေးရွာ မှာ ဘင်္ဂါလီတွေ အသတ်ခံရတယ်လို့ AP သတင်းဌာနနဲ့ဧရာဝတီသတင်းဌာန တွေကရေးသား ခဲ့တဲ့ အပေါ် အဓိကရှင်းလင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
ကင်းလှည့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကိုဦးဆောင်ခဲ့သူဟာ ကေဖိုက်ဒူလာဆိုသူ အကြမ်းဖက် သမား ဖြစ်ပြီး အခင်းမဖြစ်ပွားခင်(၁၀)ရက်မှာ ရွာကိုလာပြီးသေနတ်အတုတွေနဲ့ သင်တန်းပေးခဲ့တယ်လို့ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကိုကပြောပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်အပြီးမှာ အကြမ်းဖက်သူတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အပြစ်ကို ဖုံးကွယ်ချင်တဲ့ အတွက် သတင်းမှားကို အကွက်ကျကျပေးပို့ခဲ့ပြီး ဒါကိုဖော်ပြခဲ့ခြင်းဟာ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေး ကို ပိုမိုရှုတ်ထွေးအောင် လုပ်ဆောင်နေတာနဲ့ အတူတူပဲဖြစ်တယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့ ကပြော ပါတယ်။
ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကင်းလှည့်ရဲတပ်ဖွဲ့မှာ ပါဝင်တဲ့ရဲတပ်ကြပ်ကြီးအောင်ကျော်သိန်းဟာ လက်ရှိ အချိန်ထိပျောက်ဆုံးနေပြီး ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကို မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် နဲ့ သမ္မတဖွဲ့ စည်းပေးမယ့် သီးခြားစုံစမ်းရေးကော်မတီက ထပ်မံစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဦးမယ်လို့သိရပါတယ်။
မိန်းကလေးငယ်များ၏ အပျိုဖော် ဝင်ချိန်သည် လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ် များကထက် ပိုမိုစော လာကြောင်းနှင့် အဆိုပါပြောင်းလဲလာမှု၏ အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ အဝလွန်မှုနှင့် ဆက်နွှယ်နေမည်ဟု ယူဆ ရကြောင်း လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုတွင်ရေးသားဖော်ပြသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုကို သုတေသန ပညာရှင်များက အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆန်ဖရန်စ္စစကို ဧရိယာ၊ စင်စင်နတီ ဧရိယာနှင့် နယူးယောက်မြို့ရှိ အသက်ခြောက်နှစ်မှ ရှစ်နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး ၁၂ဝဝ ကျော်ကို ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အထိ အကြိမ်ကြိမ် လေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ရာမှ တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြပါ အသက် အရွယ် များတွင် အပျိုဖော်ဝင်လာကြောင်း သိသာထင်ရှားသည့် လက္ခဏာမှာ ရင်သားများ ဖွံ့ဖြိုး လာခြင်း ပင် ဖြစ် သည်ဟု ဆိုသည်။
လေ့လာမှုရလဒ်များအရ လူဖြူ မိန်းကလေးများသည် ပျမ်းမျှအသက် ၉ ဒသမ ၇ နှစ်တွင် အပျိုဖော် ဝင် လာပြီး ၁၉၉၇ ခုနှစ်က လေ့လာခဲ့သည့် ပျမ်းမျှ အသက်ထက် သုံးလေးလငယ်လာ ကြောင်းနှင့် ၁၉၆ဝ ခုနှစ်များ က လေ့လာခဲ့သည့် အချက်အလက်များ ထက် အသက်အရွယ် ပိုငယ်လာသည် ဟု သိရသည်။
လူမည်း မိန်းကလေးများသည် ပျမ်းမျှအသက် ၈ ဒသမ ၈ နှစ်တွင် အပျိုဖော်စတင်ဝင်လာပြီး ယခင် လေ့လာထားသည့် ရလဒ်များနှင့် ခြားနားမှုမရှိဟုသိရသည်။ လက်တင် အမေရိကမှ မိန်းကလေးများသည် အသက် ၉ ဒသမ ၃ နှစ်တွင် အပျို ဖော်ဝင်လာပြီး အာရှသူများမှာ အသက် ၉ ဒသမ ၇ နှစ်တွင် အပျိုဖော် ဝင်သည်ဟုလေ့လာမှုတွင် ဖော်ပြသည်။
ယခင်လေ့လာမှုများနှင့် ထူးမခြား နားသည့်အချက်မှာ မိန်းကလေးများ အပျိုဖော်ဝင်ချိန် စောရသည့် အကြောင်း မှာ အဝလွန်မှုနှင့် အဓိက ဆက်စပ်နေကြောင်း၊ မိန်းကလေး များ၏ body mass index(BMI) ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် အညွှန်းကိန်း မြင့်တက်လာမှုသည့် အသက်ငယ် ငယ်နှင့် အပျိုဖော်ဝင်စေသည့် အကြောင်း ရင်းဖြစ်ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်ထုတ် ဆေးပညာဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ကို ခင်ပွန်းများမပြောသင့်သောစကားများ
ဖခင်လောင်းတွေအတွက်ရော ၊ အနီးပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေအတွက်ပါ လိုက်နာသင့်တယ်
အမျိုးသမီး တစ်ဦးဟာ ကိုယ်ဝန် ဆောင်နေ ရချိန်မှာ သာမန် အချိန်မှာထက်
အများကြီး ပင်ပန်း နေတတ် ပါတယ်။ မွေးလာမယ့် ရင်သွေးလေး အတွက် ရင်ခုန်
စိတ်လှုပ်ရှား နေရပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ် မပါတာကြောင့်
စိတ်ဓာတ် ကျတာမျိုးလည်း ဖြစ်ရတတ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်
မိခင်တစ်ဦး နဲ့ တွေ့ချိန်မှာ သူ့ စိတ်ကို ပိုမို မသက်မသာ ဖြစ်ရစေမယ့်
စကားမျိုး မပြောမိ စေဖို့ ရှောင်သင့်တဲ့ စကားတွေကို ရေးသား လိုက်ရပါတယ်။
(၁) နင့်ကို ကြည့်ရတာ ပေါက်ကွဲ တော့မယ့် အတိုင်းပဲ။
အဓိပ္ပာယ် - နင့် ပုံစံက ပင်လယ် ကမ်းခြေက ဝေလငါး နဲ့ တူလိုက်တာ။ ကိုယ်ဝန်
ဆောင်ချိန်မှာ ဟော်မုန်းတွေက မြင့်တက် လာတာကြောင့် ဗိုက်ဖုံး အင်္ကျီတွေနဲ့
မတော်တော့ တာမျိုး ဖြစ်နေတတ် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို မပြောသင့် ပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင် အနေ နဲ့ အဆမတန် ၀ဖြိုးနေတယ်
လို့ ထင်ပြီး စိတ်ညစ်
(၂) အမြွှာ မွေးမှာလား၊ နင်တော့ အလုပ်တွေ ရှုပ်ပြီး ဒုက္ခ များတော့ မှာပဲ။
အဓိပ္ပာယ် - နင့် ကလေးတွေက ငိုတော့မယ်၊ နို့ဆာလို့ ဂျီကျတော့မယ်၊ ဒီတော့
ကလေး နှစ်ယောက် နဲ့ နင် ခြေပစ်လက်ပစ် ပင်ပန်း တော့မယ်။ လူတွေက အမြွှာ
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ရပြီ ဆိုရင် အဆိုး မြင်တဲ့ ရှုထောင့်ကပဲ ကြည့်ပြီး ပြောတတ်
ကြပါတယ်။ ပင်ပန်း တော့မှာ၊ အိပ်ပျက် တော့မှာ၊ လက်မလည်အောင် အလုပ်ရှုပ်
ရတော့မှာ စသဖြင့်ပေါ့။ တကယ်တော့ အမြွှာလေး မွေးလာရင် တစ်ကြိမ် နဲ့ ကလေး
နှစ်ယောက် ရလာလို့ အဖော်ရတာ၊ မွေးဖွားစရိတ် သက်သာတာ၊ အပြုံးနှစ်ခု
တစ်ပြိုင်တည်း ရတာ စတဲ့ ကောင်းကျိုး တွေကိုလည်း ရရှိ စေနိုင် ပါတယ်။
(၃) အခု အိပ်ရေး ၀၀ အိပ်ထားဦးပေါ့။
အဓိပ္ပာယ် - နောင်ဆိုရင် အိပ်ရဖို့ ကောင်းကောင်း လမ်းမမြင်ဘူး။ မိခင်
ဖြစ်တော့မယ့် သူတွေ အနေနဲ့ ကလေး မွေးပြီးတာ နဲ့ အိပ်ရေးပျက်မယ့် အရေး
တွေးပြီး လန့်စရာ စကားပါ။ ဒီလို စကားမျိုးက ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေကို
စိတ် ပင်ပန်းစေမယ့် စကားဖြစ်လို့ ရှောင်သင့် ပါတယ်။
(၄) တတ်နိုင်သမျှ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လှုပ်ရှားထား။
အဓိပ္ပာယ် - ကလေး မွေးလာတာ နဲ့ ဘာမှ လုပ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကလေး
မွေးပြီး ပေမယ့် ရုပ်ရှင် သွားကြည့်နိုင်၊ အေးအေးလူလူ စာဖတ်နိုင်၊
စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေမှာ ညစာ ထွက်စားနိုင်တဲ့ မိဘတွေကို အများကြီး
တွေ့ဖူးပါတယ်။ အလုပ်မှာလည်း အောင်မြင်ပြီး ပျော်ရွှင် ကျန်းမာတဲ့
ကလေးငယ်တွေလည်း ရှိတဲ့ မိခင်တွေလည်း အများကြီး ပါပဲ။ ဒါကြောင့်
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်ကို ဒီလို စကားမျိုး ပြောပြီး စိတ်ဓာတ် ကျအောင်
(၅) နင့် ပုံစံနဲ့ မိခင်နို့ချို ကိုပဲ တိုက်ဦးမယ်ပေါ့ ဟုတ်လား။
အဓိပ္ပာယ် - နင်ရဲ့ အားအင် မရှိတဲ့ပုံ နဲ့ ကလေးကို မိခင်နို့ချိုပဲ
တိုက်ရင်တော့ ကလေးက အာဟာရ ကောင်းကောင်း ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကလေးတွေကို
မွေးပြီး ခြောက်လ အထိ မိခင်နို့ချို တစ်မျိုးတည်း တိုက်ကျွေးတာက
အကောင်းဆုံးလို့ ပညာရှင်တွေက ဆိုထား တာပါ။ မိခင်က ကိုယ်ခန္ဓာ အရွယ်အစား
ဘယ်လောက် သေးသေး၊ သူ့ရင်သွေးကို ပြည့်ဝတဲ့ အာဟာရ ရတဲ့ အထိ နို့ချို
တိုက်ကျွေး နိုင်ပါတယ်။ အစားအသောက် ကိုတော့ အစုံ စားပေး ပါ။
(၆) နင့် ကြည့်ရတာ စိတ် မသက်မသာ ဖြစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာ။
အဓိပ္ပာယ် - ကိုယ်ဝန် ဆောင်ရတဲ့ ဒုက္ခတွေလေ။ ဒါကြောင့် အလှပျက်ရပြီ။
ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန်မှာ ခြေထောက်တွေ ရောင်တာ၊ မျက်နှာ နွမ်းနယ်တာ စတဲ့
ဝေဒနာတွေကို တစ်ခါတစ်ရံ ဖြစ်ပေါ်တတ် ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာ သူရဲ့
ဝေဒနာတွေကို ထောက်ပြပြီး မပြောသင့်ပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထား ပေမယ့် လှနေဆဲ
ပါပဲ လို့ ပြောပေးသင့် ပါတယ်။
(၇) နင် ဗိုက်ဆာ ပြန်ပြီလား။
အဓိပ္ပာယ် - အခု လေးတင် နင် အများကြီး စားပြီပြီလေ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်
မိခင်တချို့က အမြဲလိုလို ဗိုက်ဆာ နေတတ်တယ် ဆိုတာကို စိတ်ထဲမှာ ထားပေးပါ။
ဒါကြောင့် သူတို့ ဗိုက်ဆာလို့ တစ်ခုခု စားချင်တယ် ဆိုရင် ဘာမှ မပြောသင့်
အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ဖောက်ခွဲရေးသင်တန်း...
ရုံးတွေ အဖွဲ့ စည်းတွေမှာ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Networking...
အင်တာနက် ဆိုင်ရာ Network ကို ပိုင်နိုင်စွာ သေချာ ရ...
တီထွင် ဆန်းသစ်မှုများနှင့် ပါရမီ ရှိသူများ အား ပံ့ပ...
မသန်စွမ်း ဦးရေကို တိုးပွား လာစေတဲ့ ယာဉ် မတော် တဆမ...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ကို ခင်ပွန်းများမပြောသင့်သောစကာ...